Porn Post Porn ယဉ်ကျေးမှု (၂၀၁၂) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က Porn On
“ လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေပြီးသင့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသိမ်းသွားပါ။ ဆုံးမပဲ့ပြင်။ သင်၏လွတ်လပ်ခြင်းကိုရှာကြလော့။ ” –Frank Herbert
ယနေ့စိတ်အားထက်သန်သောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်သူတို့၏ပေးသွင်းသူများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုမည်သို့ဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏကြားရသည်။ သို့တိုင် porn တက်ပေးခြင်းရှိသူများ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံဖော်ဖို့စတင်နေကြသည်။ အိမ်ရှေ့မှပြန်လာသောစစ်သားလိုပဲ, သူတို့နှင့်အတူအသက်တာ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များထဲသို့ pithiest ဆုံးနဲ့ရွေ့လျားနေသောအသိအမြင်အချို့ကို ပူဇော်. , highspeed porn, မလိုဘဲ။
www.yourbrainonporn.com ၏ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အဖြစ်ကျနော်တို့အများကြီးတွေ့မြင် ဝက်ဘ်ဆိုက်များဘယ်မှာယောက်ျား (အဓိကအားဖြင့်) နဲ့-နှင့်ကျော်လွန်ပြီး-porn မိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုအချင်းချင်းလွတ်လပ်စွာဟောပြောလော့။ ဥပမာအားဖြင့်, 35,000 အပေါ်စူးစမ်းရှာဖွေသူများ + ရှိပါတယ် Reddit.com တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်အများစု၏လူငယ်များသည်ယနေ့ခေတ်တွင်သွားများဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ငယ်ရွယ်ကြသည် ထူးခြား highspeed porn ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့.
ညစ်ညမ်း Post-porn ယဉ်ကျေးမှုသည်ယခုအချိန်အထိရေဒါတွင်ရှိနေသေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိခိုက်ခံရသူအများစုသည်အမည်မဖော်လိုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလူငယ်များသည်အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည်နှင့်အမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းမှလုံးဝစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားတဲ့လူမဆန်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဆီသို့ဘယ်လိုသွားခဲ့သလဲဆိုတာအရူးအမူးစွဲမက်စရာပါ။ လက်ကျန်ဘယ်မှာလဲ ??? ငါ ၁၀-၂၀ နှစ်အတွင်းမှာ၊ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းဟာလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုအဓိကအသိပညာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုအချိန်အတော်ကြာတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-၁၅ နှစ်အထိငါတို့ဟာဒီလောက်များပြားတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေနဲ့မထိတွေ့ဖူးဘူး။ သင်၏ပြင်ဆင်မှုကိုရရန်ရှုပ်ထွေးနေသော“ စာအုပ်ဆိုင်” သို့သွားစရာမလိုပါ။ သင်ကငွေပေးစရာမလိုဘဲ၎င်းအတွက်သင်၏မျက်လုံးများနှင့်ချက်ချင်းဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒါကသဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။
“ (၁၇ နှစ်ကနေ ၁၃ နှစ်အရွယ်) မင်းရဲ့လိင်စိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့သင်ဆန္ဒရှိသူတွေကသင့်ရွေးချယ်မှုကိုသြဇာမခံပါနဲ့။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ချိန်ကအဖြစ်မှန်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါက၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုယခုသင်သိပြီ၊ ကြိမ်ဖန်များစွာရိုက်လျှင်သင့်အား ထပ်မံ၍ သင်ကြားပေးမည်မဟုတ်။ ”
"ဒါဟာခက်ခဲခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် [rebooting] ကကျွန်တော့်ဘ ၀ ကိုလုံး ၀ ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ မလုံခြုံမှု၊
“ အကယ်လို့မင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုယူပြီး ၁၀ နှစ်ကြာအင်တာနက်အမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn ကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်သင့်မှာကျန်းမာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကမ္ဘာကြီးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ”
ဤသည်တို့အတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် လွန်း သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြား လွန်း ရှည်လျား။ အမျက်ထွက်ရယူလိုက်ပါ။ တကယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ရယူပါ။ ဒီအစွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုလုယက်ဖြစ်ပါတယ် အချိန်, အများဆုံးရှားပါးလာခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်များအဖိုးတန်နှင့် စွမ်းအင်ကိုဒီအချိန်ကိုထိထိရောက်ရောက်သုံးနိုင်အောင်ငါတို့သုံးတာပေါ့။ ဒါကငါတို့ဘ ၀ ပဲ၊ ဒါကမိုက်မဲတဲ့ shit ကိုအလဟ like ဖြစ်အောင်ဖြုန်းတီးပစ်လိုက်တာပဲ။ မရှိသူတစ် ဦး မှ။ PMO အတွက်အကျိုးကျေးဇူးမရှိပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ဘဏ်အကောင့်ကိုလုယက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသထွက်မှာလား။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသော bullshit ၏လိဂ်၌တည်ရှိ၏။ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံလုယက်တာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံပဲ အချိန်ပြီးတော့အဲဒါမင်းရဲ့ စွမ်းအင်ကို။ သင်ငွေပြန်ရနိုင်သည်၊ သင်ပြန်မရနိုင်သောအရာဖြစ်သည် အချိန်။ စွမ်းအင်ပြန်လာနိုင်သော်လည်းပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သငျသညျ fap သည့်အခါသင်လုပ်နေတာအားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော် fuck ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမင်းကိုစိတ်ဆိုးစေတာလား။ အဲဒါကျွန်တော့်ကိုအရမ်းစိတ်ဆိုးစေတယ်
နောက်တခါမင်းလက်ကိုသင်၏လက်ထဲထည့်လိုက်လျှင်ဒေါသထွက်ပါ။ သငျသညျအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီး၌သင်တို့၏အရေးယူမှုမရှိခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ရှိနေစဉ်, သင်က demented baboon ကဲ့သို့အချို့သော jacking တူသောကြောင့် jacking ကြောင့်စိတ်ဆိုး။ ဒီပင်တည်ရှိကြောင်းစိတ်ဆိုး။ သင်မြေပြင်မှစတင်ရန်လိုသည်ကိုဒေါသထွက်သည်။ သင်ရရှိနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများအတွက်အစားထိုးရန်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုဘယ်တော့မျှရလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်စိတ်ဆိုးပါသည်။ သင်၏အသားကိုနင်းခြင်းထက်အကန့်အသတ်ဖြင့် ပို၍ အဖိုးတန်သည့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်လူသားများပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားအရာများကိုများစွာလုပ်နိုင်သောအလွန်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်လေးကိုသင်ဘယ်တော့မျှရလိမ့်မည်မဟုတ်တော့ဟုဒေါသထွက်သည်။
“ ကျနော့် ၈၆ နှစ်အရွယ်အဘိုးဟာကြမ်းတမ်းပေမယ့်ရိုးသားပြီးစမတ်ကျတယ်။ တစ်ခါကသူကကျွန်တော့်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်နေတာကိုတွေ့တော့“ ဒါကအမျိုးသမီးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါမိုက်မဲ မင်းဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့လက်ကို p___y နဲ့မင်းရဲ့ဝီလီယံလူမိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ” ငါလုပ်ခဲ့တယ်”
လူတွေကမကြာခဏဆိုသလို porn 'blind blind တပ်မက်ခြင်းသည်တကယ့်ဇီဝဗေဒဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်သင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းမီဒီယာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမရှိကြောင်းသူတို့နားလည်သဘောပေါက်ရန်ပျက်ကွက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အတွေးအခေါ်အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအသိစိတ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသဘောသဘာဝကိုကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအလိုဆန္ဒများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကမ္ဘာကြီးနှင့်မတူဘဲ 'သဘာဝ' အဖြစ်အမှန်တကယ်လက်ခံရန်လည်းကျဆင်းလာသည်။
“ ညစ်ညမ်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေခံစားနေရတဲ့သူတွေကို - တတိယပါတီရဲ့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲသင်မြင်နိုင်တာကိုယုံပါ။ ငါတို့ပိုင်နယ်မြေကပေးထားတဲ့အတုမြေပုံတွေကိုလျစ်လျူရှုပြီးကိုယ်ပိုင်မြေပုံရေးဆွဲရမယ်။ ”
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ သူတို့သည်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေပုံကိုအမြဲတမ်းဒေါသထွက်နေသည်။ သူတို့လက်များနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရပ်ရမည်ကိုမသိသောစိတ်ပျက်နေသောမျက်စိများ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကူးစက်ရောဂါတစ်ခု။ ”
"porn ကသင်ကျော်လွှားရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုအတိအကျသင်ထံမှဖယ်ရှားပေးသည်: ယုံကြည်မှု။ "
“ porn သည်ဂူထဲ၌မှောင်မိုက်အရိပ်များသာဖြစ်သည်၊ အသုံးပြုရန်စဉ်းစားနေသူမည်သူမဆိုအတွက် - ဒါဟာမထိုက်တန်ပါ။
“ ယောက်ျားလေးများသည်ယောက်ျားများဖြစ်လိမ့်မည်” ဟူသည်အတိအကျမလျှောက်တော့ပါ။ မိဘများအနေဖြင့်၎င်းသည်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုသည် -“ ယောက်ျားလေးများသည်လူမှုရေး၊ မုန်းတီးခြင်း၊ ငါ့အတွက်မြေးကိုဘယ်တော့မျှထုတ်လုပ်မည်မဟုတ်သောလူမိုက်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ”
“ ကျွန်တော့်အလေ့အထဟောင်းကိုဘယ်တော့မှပြန်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားကိုငါသိပြီ။ သင်၏မထင်မှတ်သောဖိုင်များအဖြစ်ပုံဖော်ထားသောဖိုင်တွဲများထဲမှသင်၏ wank stash ကိုစာကြည့်တိုက်ထဲ၌အလျင်အမြန်ဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ သငျသညျလျှို့ဝှက်အတွက် fap နိုင်ပါတယ်; ဒါပေမယ့်မင်းအပြင်ထွက်ပြီးမင်းရဲ့လူသားချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမင်းရဲ့အလေ့အထတွေကိုမြင်နိုင်တယ်။ TL; DR: မင်းက matrix ကိုဖြုတ်လိုက်ရင် code ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ "
"ကြီးစွာသောဘဝတိုင်း၌အထဲတွင်ကြီးစွာသောစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ " - Zan Perrion
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရောမအင်ပါယာအတွင်းမွေးဖွားလာမည်ဆိုပါက porn တွင်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်ပန်းချီကားများ၊ ငါတို့အားလုံးမှာခဲယဉ်းတဲ့သစ်သားတွေရှိလို့ပြnoနာမရှိဘူး။
ဒါနဲ့ကိုယ့်တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ၂၀၁၂၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့မျက်မှောက်မှာအော်ဂဇင်ကိုသာပြုမယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးခဲ့တယ်။ ငါထွက်ရှိအခြားအိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေအကြံပေးချက်အချို့ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ကဏ္ aspects တော်တော်များများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတိုးတက်ခဲ့သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်အကြောင်းပြောမည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၈ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သက် ၂၀ ရှိပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက် - အခြားသူများသည်မော်ကွန်းလိင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်။ ဒါကဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်၊ ခင်ဗျား၊ လူပါ၊ မင်းရဲ့အိပ်ခန်း၊ မင်းမပြည့်စုံတဲ့ဇနီးဆီသွားပြီးမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မော်ကွန်းလိင်ဆက်ဆံပါ။
"[လူငယ်တစ် ဦး ရန်] ဤသည် nubile အမျိုးသမီးများအများအပြားတည်ငြိမ်, ပျိုးထောင်ဆက်ဆံရေးကိုအလွန်ဆိုးရွားစိတ်ဝင်စားမဟုတ်သည့်အချိန်တွင်သင်၏ဆွေမျိုးသေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကစူးစမ်းဖို့ထွက်ဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့အိမ်မှာထိုင်ပြီးမြွေကိုလည်ပင်းညှစ်သတ်လို့မရတော့ဘူးလို့ထင်လား။ ”
ငါအချိန်အတွက်ပြန်သွားပြီး, ငါ့လိင် porn မှကိုယ်ခံစွမ်းအားခဲ့စဉ်းစားဘို့အကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ပေးပါကဘာလဲဆိုတာ။
ကျွန်တော်ဟာပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်တုန်းကမှပြtroubleနာမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ ငါလက်ကိုရနိုင်သမျှကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ဤအရာအားလုံးထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။ သူတို့နေရာတိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ရုံသာမကအခမဲ့ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်ကစားခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ တီဗွီကြည့်ခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါကိန်းဂဏန်းများကိုနေ့တိုင်း ၁၄ နာရီအထိအိပ်ရာပေါ်တွင်တူညီသောနေရာ၌ထိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့အတင်းဖိအားပေးရမယ်။ ငါစာအုပ်ကောက်ယူနှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစာမျက်နှာထက်ပိုဖတ်ပါကြပြီမဟုတ်။ သငျသညျ fuckers ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်
“ လူမှုရေးအရရော၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပါအောင်မြင်မှုပိုရလေလေအရာဝတ္ထုတွေဆီကိုဘယ်တော့မှပြန်လှည့်ချင်တယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်လေလေဖြစ်သည်။ သငျသညျထိုချီးမွမ်း, ဒါမှမဟုတ်သင်လမ်းဘေးအပေါ်ရှောက်သွားမိန်းကလေးကနေပြုံးသောအခါ, ကမှော်ပါပဲ။ ဒီကွန်ပျူတာကုလားထိုင်ထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့သင်အရမ်းကြီးလွန်းတယ်။
“ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့လေ့လာမှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ဖို့စိတ်မ ၀ င်စားပါဘူး။ ရောင်းရန်ထုတ်ကုန်မရှိပါ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးစရာလည်းမရှိပါ။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လက်ရှိပြtheနာကို (ပင်ရည်ရွယ်သည်) ကိုပင်သတိမပြုမိဘဲကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုနားလည်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းအကြောင်းအရာသည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေ၊ “ မတိုင်မီ“ သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား” ကိုတောင်းဆိုသူများသည်လွယ်ကူသောတစ်လမ်းဖြင့်လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အလေးအနက်ထား - သင်က“ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကို” ဆေးလုံးထဲမထည့်လျှင်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ ရသည်။
"တိုင်း။ မိန်းကလေး ငါနှင့်အတူရှိခဲ့သည်ငါ့ကိုအားဖြင့်သူမ၏အပေါ်တစ် ဦး ဝန်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းကိုလုပ်ဖို့ထင်နေသလိုပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုခွင့်ပြုတာလဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ထင်နေသလိုပဲ။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်မနှစ်သက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကြောင့်မိန်းကလေးတွေကိုစအိုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပေးထားတယ်။ ငါတို့အများစုအတွက်လိင်မှုကိစ္စသည်လိင်ကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရင်းမဟုတ်ဘဲအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းဖြစ်သင့်သည်။
“ ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ၀ န်ဆောင်မှု” ရန်လိုအပ်သည့်စက်တစ်လုံးအဖြစ်မခံတော့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကျန်သက်တမ်းတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော်လည်းသက်ရှိရှူရှိုက်မိသည့်သက်ရှိသတ္တဝါတစ် ဦး အနေဖြင့်အသည်းအသန်ဂရုစိုက်ရန်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဟော်မုန်းများပြည့်နှက်နေသည်။ ငါ့ကိုဝိုင်းသောသူတို့။ "
လူတွေကိုဒီအကြောင်းအသိပေးရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ဖို့လိုတယ်။ အလေးအနက်ထား။ ၇ နှစ်ကျော်ကြာသောကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး နှင့်တူခံစားရတယ်။ ငါယုံကြည်စိတ်ချရပြီ၊ အထွက်၊ ငါ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြန်ရောက်လာပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးငါမပြောတတ်ပါ။ ငါဒီကနေ F ** ဘုရင်ခေါင်မိုးမှဤအရာကိုပြသမည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းခြင်းသိပ္ပံပညာစသည့်အန္တရာယ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျောင်းများသည်လိင်ပညာရေးကိုသင်ကြားရန်လိုအပ်သည်။ အခြားသူတစ် ဦး ဦး မှကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ခဲ့သောငရဲကိုဖြတ်ကျော်ရန်မလိုအပ်မီ၎င်းသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
“ porn ကိုကြည့်နေတုန်းကျွန်တော်ဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအလွန်ထိရောက်မှုမရှိဘူး။ အလုပ်၊ မိသားစု၊ ကြွေးမြီ၊ အမျိုးသမီးများ၏ခံစားချက်များ၊ ကလေးမွေးမြူခြင်းအလားအလာ (ကျွန်ုပ်သည်ရယ်စရာဖြစ်ပုံရသည် - အဘယ်ကြောင့်ကလေးတစ်ယောက်ရလိုသနည်း) နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါအချက် ၂ ချက်ကိုကျွန်ုပ်မပေးခဲ့ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အန္တရာယ်များ၊ မဲပေးခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေး၊ ကျွန်ုပ်၏ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်။ ဆိုလိုတာက Reddit ပို့စ်များကိုကြာရှည်စွာရေးသားနိုင်ခြင်းဟာဘာကြောင့်မှန်လဲ၊ မှားသည်ဆိုတာကိုအဆုံးမဲ့အတွေးအခေါ်ဖြင့်ရေးသားနိုင်ခြင်း။ ဒါပေမယ့်အရေးယူတဲ့အခါငါသေပြီ။ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သောလူ ဦး ရေအချိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အလွန်ကြီးမားသောဒုက္ခရောက်နေသည်။ ခဲအဆိပ်သင့်မှု၏သိမ်မွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ရောမအင်ပါယာပြိုလဲသွားသည်ဟူသောသမိုင်းဆိုင်ရာဒဏ္myာရီတစ်ခုမှာသူတို့၏အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ခဲပိုက်နည်းပညာအသစ်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်သည့်အချက်မှာယနေ့ခေတ်ကွန်ပျူတာမော်နီတာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အိမ်တိုင်းနှင့်အိပ်ခန်းတိုင်းသို့အင်တာနက်ကို ဦး နှောက်ထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ”
နောင်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးကရက်များကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်တိုတောင်းသောကာလတို (၁ မိနစ်) ။ ဆိုးရွားလွန်းသောနှစ်ရှည်လများ (အနှစ် ၈၀ သို့မဟုတ်သင့်ဘဝသက်တမ်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေ) ။ ဒါကြောင့်အစောပိုင်းမွေးစားဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်း ၈၀ အတွင်းလူတိုင်းလုပ်နိုင်ကြဖို့အခုအချိန်မှာတစ်ခုခုလုပ်ပါ။
ကျွန်တော့်မိသားစုအိပ်ပျော်နေသောထိုမဆုတ်မနစ်လိုက်ရှာသည့်အမဲလိုက်ခြင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေနေစဉ် ၁၁ နာရီ ၀ န်းကျင်တွင်မဖြစ်ရန်အလွန်ကောင်းပါသည်။
“ (တစ်ပါတ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီ) ငါကကမ္ဘာကြီးကိုကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အလွှာပေမဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုပြောပါရစေ၊ သူမမျက်နှာသည်ယောနိနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသောသူနှင့်စကားပြောခြင်းသည်တကယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ”
"Porn က 'ဒိန်ခဲနဲ့လေးပုံတစ်ပုံပေါင်ဒါ' အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးတယ်။ အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကြည့်ကောင်းအောင်ကြည့်ပြီးအလိုအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'ပြည့်ဝ' သည်ဟုခံစားရပြီးနောင်တမရလျှင်နောင်လာမည့်အချိန်အထိထိုငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုခံစားနေရပါလိမ့်မည်။ "
ငါအခုဘန်ကောက်ရောက်နေပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်ပဲ ခင်ဗျားထင်တာကလိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမြို့မှာနေရတာကငါ့ကိုမှန်တယ်၊ အပျိုလေးမဟုတ်လား၊ ငါအနီရောင်အလင်းရောင်ခရိုင်၌ပင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက် 10 ကမ်းလှမ်းမှုဆည်းပူးခဲ့ကြရပေမည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါ Soi Cowboy ကိုတောင်လျှောက်သွားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲစူးစမ်းလိုစိတ်နှင့်တောင့်တမှုအရိပ်အောက်မှသာ။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်သည်လိင်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်ငါသေချာပေါက်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အပေါ်ယံဆက်ဆံရေးကိုငါမကြိုက်ဘူး။ ငါအတုဘာမှမကြိုက်ဘူး
SE Asia တွင်အခန်းကဏ္ based အပေါ် အခြေခံ၍ ကွဲပြားခြားနားသောလူတို့အားမတူညီသောမျက်နှာများပြသရန်အကြောင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ ဘားမိန်းကလေးများသည်ဂရုစိုက်တတ်သောချစ်ခင်ကြင်နာတတ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မျက်နှာကိုပြသသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြသရန်သာဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံကုန်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကမင်းကိုမချစ်တော့ဘူး၊ ကိုပြု ပထမ ဦး ဆုံးဌာန၌တည်၏။ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကိုအနောက်တိုင်းသားတွေကထောင်ချောက်ထဲကျပြီးယဉ်ကျေးမှုကိုမုန်းတီးခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြtroubleနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်။
NoFap ကထင်ယောင်ထင်မှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုသင်ပေးတယ်။ ငါကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ icing ရှာနေမဟုတ်ပါဘူး။ ကိတ်မုန့်ကိုတောင်ရှာနေတာတောင်မှငါလိမ်တာငါတို့သိလို့လေ။ ငါစစ်မှန်သောလူများနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝိုင်းရံ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကတစ်စုံတစ်ခုကိုစတင်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ခြင်းမဖြောင့်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ဖြတ်ပစ်လိုက်သည်။
NoFap သည်သင့်ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည့်တကယ့်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင့်အား“ fuck” ဟူသောစကားလုံးကိုသာတုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောလူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့အများကြီးပိုကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ NoFap ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြည်ပမှာနေစဉ်
"ဒါဟာအားလုံးဟော်မုန်း (dys) စည်းမျဉ်းနှင့်ပတ်သက်။ ။ သုံးပတ်ကြာသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမပြီးပါကသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားရသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးဟာပြိုလဲလာတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် - HELL YEAH IM GONNA ROCK” to“ အသက်ရှူတဲ့လေလို့ပြောပါရစေ။ ငါဟာအရှုံးသမားပဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ်ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ဟာအသက်ရှူခြင်းနဲ့တူတယ်၊ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမလွဲ၊ မဖျားဘူး၊ ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူး၊ ငါလက်နှစ်ဘက်စလုံးကိုဖဲ့ပြီးကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးထဲထည့်လိုက်ရင်ငါလမ်းရှာမယ်။ အကယ်၍ သင့်တော်တဲ့ reboot ကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်မှတ်ပြီးဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုကြေငြာလိမ့်မယ်။ ”
“ စွဲလမ်းမှု - ရှာလို့မရနိုင်တဲ့အရာ၊ ဘဝမှာသင်ရှာနေတာအချို့ကိုနည်းနည်းလေးတွန့်နေသောကြောင့်ရှာခြင်း။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တာရှည်ခံသည် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထဲကဖြစ်သကဲ့သို့။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆောင်းပါးများသည်ထိုအချက်ကိုအမြဲလက်လွတ်မခံပါ။ ”
Gretchin Rubin ရေးသားသော“ Churchill ကိုကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်း ၄၀” စာအုပ်ကိုဖတ်သောအခါဤတိုက်တွန်းချက်သည်ထိ မိ၍ လဲနိူင်သည်။ အိပ်ခန်းထဲမှာအနှစ်သာရ " သုတ်ရည် retention ကိုအပေါ် Winston Churchill ကိုးကား
"အိုးဟောင်းနွမ်းသောနေ့ရက်များ၊ လှေကားပေါ်ကမိန်းကလေးတစ် ဦး ရဲ့စကတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းကိုလတစ်လလောက်လောင်ကျွမ်းစေမှာပါ"
"porn ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကငါတစ်ခါမှမပျက်ဆီးခဲ့တဲ့အစ်ကိုကြီးပါ။ "
၂၁ ရာစုအသစ်ဖြစ်တဲ့ Broadband-ED ED ရောဂါခံစားနေရသူပါ။ ငါဟာစစ်မှန်သောဇာတိအသွေးအသားနှင့်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးရန်အခွင့်အလမ်းသုံးခုရှိပြီးတစ်ခါတလေကျရှုံးခဲ့ဖူးတယ်။ (ဥပမာ - ဒီအမျိုးသမီးတွေအိပ်ရာပေါ်မှာလဲပြီးသွားဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ အဝတ်တွေလည်းချွတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ) အခြားအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်၊ တခြားမိန်းကလေးတွေတောင်ကျွန်တော့်အိပ်ရာမှာအိပ်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၂၂ နှစ်ကြားမှာတောင်အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့ပြောင်းမသွားခဲ့ဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်တိုင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အရှက်, စိတ်ဓာတ်ကျနှင့် emasculating ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းဤအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကျွန်ုပ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ငါသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းခံစားခဲ့ရသောအရာကိုဖော်ပြရန်စကားလုံးတစ်လုံးကိုရွေးချယ်နိုင်လျှင် 'ဂြိုလ်သား' ဟူသောစကားလုံးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုမည်။ ဒါဟာငါအတုနှင့်နိုင်ငံခြားခံစားရတယ်။ ဒါကကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးဒီနှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးသေခြင်းတရားကိုကိုင်တွယ်နိုင်အောင်အပြင်းအထန်လုပ်ထားတာနဲ့တူတယ်၊ ဒါကတကယ့်အမှန်တကယ်လိင်မဟုတ်ဘဲသာမန်လိင်ဆက်ဆံမှုလို့ငါ့စိတ်ကယူမှတ်ခဲ့တယ်။ ငါ porn အတွက်ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်, ပြproblemနာမရှိ, ဒါပေမယ့်ငါ့ကို၏ဘဝအဘို့ငါစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဘို့အခက်ခဲရနိုငျသညျ။ "
“ ED ရောဂါတွေအရင်ကထက်များတာများတယ်၊ အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေသာမကငါတို့အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်ပါ (ကျွန်မအသက် ၂၃ နှစ်) ။ ကမ္ဘာမြေ၏သမိုင်း၌အစဉ်အဆက်ပထမ ဦး ဆုံး။ ပြီးတော့လူတွေဘာတွေပိုကောင်းလာမလဲဆိုတာကိုစိတ်ပူနေကြတယ်။ i-Phone 23 or Galaxy s5? ငါတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ကျွန်တော့်အဖေနဲ့အဖေကတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဘဝမှာသူတို့လိုချင်တာကိုအောင်မြင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတဲ့လူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ”
“ [အသက် ၂၂ နှစ်] လူတွေကသူတို့နှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုရရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ။ သူတို့ကထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ချင်တယ်။ ဒါကစွဲလမ်းမှုဖြစ်တယ်။ ငါဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ပိုကောင်းမသိခဲ့ပါ ယခုမူကားငါလုပ်! ညစ်ညမ်းသောစကားဆိုသည့်ငြင်းဆိုချက်ကောဘယ်လိုလဲ။ ဒါကမင်းရဲ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ မင်းကအရမ်းလန့်လန့်လန့်လန့်နဲ့လုပ်မိလိမ့်မယ်၊
ကျွန်ုပ် ၁၀၀% ပြန်လည်ကျန်းမာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်ကို Fort Knox ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်မည်။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုပန်းချီကားများကိုကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ဖြင့်ဆေးကြောထားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေသော oh-so- လွတ်မြောက်သည့်ယဉ်ကျေးမှု၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အများစုသည်စာဖတ်သူများအားကျားမမခွဲခြားဘဲကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်၊ သူတို့ကိုစောစောနှင့်မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံရန်နှင့်မည်သူ့ကိုမဆိုအားပေးရန်၊ သူတို့၌ရှိသည့်မည်သည့်ထူးဆန်းသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုမဆိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အားပေးသည့်တူညီသောအရင်းအမြစ်များမှဖြစ်သည်။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေအားလုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူတစ်ယောက်ယောက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုငါမုန်းတီးပြီးလုံးဝချုပ်ချယ်မှုမရှိခြင်းကိုထိရောက်စွာထောက်ခံသည်။
“ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကကျွန်တော့်ဘဝပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားရတာအရမ်းထူးဆန်းတယ်။ PMO ဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့မင်းဟာတကယ်ဆိုးဝါးတဲ့ရည်းစားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခြင်းဟာလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်နေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခြင်းပါ။
“ ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမည့်မိန်းကလေးငယ်များသည်ခြောက်နှစ်နှင့်ခုနစ်နှစ်ဖြစ်လာသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ တကယ်တော့သူတို့အားလုံးကချစ်စရာကောင်းတယ်”
လိင်မှုကိစ္စကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးထားရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အဲဒါကိုမရှိသည်ဖို့ "အေးမြမဟုတ်ပါဘူး"; သင်မရလျှင်သင်အရှုံးသမားဖြစ်သည်။ ဒါကလူကြိုက်များတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကံမကောင်းတာပဲ။ တကယ်တော့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဆိုတာပြpornနာတစ်ခုဆိုတာငါမသိဘူးလေ။
“ ငါရည်းစားနဲ့အတူအိပ်ပြီးကောင်လေးကိုတဖြည်းဖြည်းညင်သာစွာနူးညံ့စွာနမ်းလိုက်တယ်။ ဒါဟာအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမမည်မျှလှ၏! ဒါကတကယ့်အစစ်ပဲ။ Porn ကရယ်စရာပါ၊ porn sucks; ငါတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေတွေးနေခဲ့တာလဲ porn သည်အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအမြတ်ထုတ်ရန်မဟုတ်၊ နောက်ဆုံးတော့ဒါကြောင့်ငါကနေဝေးကှာ။ "
“ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းကာလများမှရည်းစား၊ ရည်းစား၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအပါအ ၀ င်လိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုအပေါ်ကောင်းသောသဘောထားကိုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံ၊
အနည်းဆုံး ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်လူကြိုက်များလာသည့် အချိန်မှစ၍ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုလွယ်ကူလာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူမှု - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုဥပဒေဖြင့်တားဆီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှမတတ်နိုင်ပါ။ (ဆိုလိုသည်မှာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုမြှင့်တင်ရန်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဖျက်သိမ်းသည့်အရေခြုံသောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအထိတ်တလန့်) ။
စိတ်အားထက်သန်မှုတိုးပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ချုပ်တည်းမှုဖြင့်ဆန္ဒအလျောက်ထွက်ခွာသွားမှသာလျှင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုပြည့်စုံစေသည့်ပြည့်စုံသောလိင်ဘဝကို ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။
အဆိုပါ fked တက် porn စက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေစိတ်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့သည်ကလေးများကိုပူပြင်းသည့်နေရာများတွင်အရောင်အသွေးစုံသောကြယ်ပွင့်စာအုပ်များပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
"90 ကာလ၌ကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည်။ ငါတို့ဟာ VHS တိပ်ခွေတွေနဲ့လှည့်ပတ်နေတုန်း၊ scimbled skinimax ကိုစလိုက်ပြီး brachiosauruses မှာကျောင်းတက်နေတုန်းပဲ။ အခု ၁၀ နှစ်လောက်ကြာတော့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကသူတို့ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်မှုကောင်းကောင်းနဲ့တုန့်ပြန်တာလဲလို့တွေးမိနိုင်တယ်။
“ ပြုံးတာကမင်းကိုစကားပြောချင်တဲ့သူတွေကိုပွင့်လင်းစေတယ်။ လူသားများသည်လူမှုရေးဖြစ်ခြင်းအပေါ်များစွာမှီခိုအားထားခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောဆေးနှင့်တူပြီးမည်သူမဆိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကလူမှုရေးဘဝနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ”
“ ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေထွက်ပြေးရတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ။ ငါအဲဒါကိုလူ့လိင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်သာမြင်တယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတဲ့အယူအဆကိုတကယ့်ပြscနာလို့မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်၊ ဒါကပိုလို့တောင်အန္တရာယ်များစေတယ်။ ”
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးမတိုင်မီ PMO စွဲစွဲလန်းလန်းရှိသူမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသလား။ ပထမမဂ္ဂဇင်းများမတိုင်မီ? အစားအစာပြုပြင်မွမ်းမံမီနှလုံးရောဂါမည်မျှ? မကြာခဏထိတွေ့ခြင်း၊ ၁၀၀% သဘာဝလေနှင့်နေတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းမတိုင်မီစိတ်ကျခြင်းမည်မျှရှိသနည်း။ စီးကရက်မသောက်မီအဆုတ်ကင်ဆာမည်မျှရှိသနည်း။ သတိထားရမယ်၊ ကမ္ဘာကြီးဟာအရမ်းမြန်လွန်းနေတယ်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၀၀ အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကထက် ပို၍ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဒီမှာကြည့်:
ရေရှည်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့ 1), အပြုအမူပိုက်ဆံများအတွက်မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်
Precise 3), သိပ္ပံနည်းကျကျောထောက်နောက်ခံ-up, သုတေသနကန်-in ကိုမှဆယ်စုနှစ်ကြာ
ပြဿနာကဒီမြေတပြင်လုံးသံသရာထိခိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စီးကရက် (ကျယ်ပြန့်) ခဲ့ကြအစောပိုင်း 20th ရာစုမိတ်ဆက်နှင့်ထိန်းညှိရန်ဆယ်စုနှစ်များစွာယူခဲ့ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့အစားအစာများအချို့အမျိုးအစားများကိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သို့သျောလညျး, အစားအစာနှင့်အတူကျနော်တို့အဆင့် 2-3 နေဆဲဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းနှင့်အတူရှိသောဘယ်မှာမှန်း? အဆိုပါအသုံးဝင်သောသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနဖြစ်ပါသည် တောင်မှနှစ်အနည်းငယ်ပင်။ "
“ PMO ကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းကငါ့အတွက်အရက်၊ နီကိုတင်း၊ ကဖိန်း၊ ငါအားမပေးတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်နှစ်ချုပ်အတွက်သိတာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ သံသယရှိသူကိုသိစေချင်တယ်၊ ဒါကတကယ့်ပြproblemနာပဲ!”
လွန်ခဲ့သောမျိုးဆက်အနည်းငယ်ကငါတို့ရှိသမျှသည် Vikings 'n' s ** t ကဲ့သို့အခြားယောက်ျားလေးများ၏ခေါင်းကိုပုဆိန်နှင့်ရိုက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခုဆိုရင်ယောက်ျားအများစုဟာ frigging bar ထဲကိုတောင်ဝင်ပြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို 'Hi' လို့မပြောနိုင်ဘူး။ တစ်ခုခုတော့အရမ်းမှားနေပြီ”
“ ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းအဖေကအိမ်နီးချင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းခြင်းကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ခင်ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး porn vid ကိုပြသချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အသက်ကိုးနှစ်ဖြစ်သည်။ Plus အားငါ့မိတ်ဆွေနှင့်ငါ stash မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိဘမရှိသူသည်သင့်ကိုရပ်တန့်ရန်နေ့အချိန်၌အင်တာနက် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တူညီသည်။ အနှစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်၊ ထိုအချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ ယခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရယူသုံးစွဲခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုမထင်ပါ။ သင်၌ကလေးများရှိပါက၎င်းအားကလေးငယ်များနှင့်အကာအကွယ်ပေးရန်အလွန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်ယခုအခြေအနေသည်ပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။ မင်းလုပ်နိုင်တာတွေကိုမင်းအိမ်မှာလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ ”
“ ၂၈ ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးဟာရှုထောင့်ပေါင်းစုံပါ။ ငါနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြော၊ Porn ကကျွန်တော့်ကို Neanderthal ထဲကိုမ ၀ င်စေခဲ့ဘူး။
“ ကျွန်မမျိုးဆက်တိုင်းယောက်ျားလေးတိုင်းသည်သင့် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုထောင့်အချို့လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကြောင်းရှုထောင့်ရရှိရန်မျက်စိဖွင့်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ ဦး ခေါင်း၌ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခံစားရနှင့်ငါ့ SO ဆီသို့ ဦး တည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ရက် ၉၀ မှာရပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး အခြား fapstronauts ပုံပြင်များတွင်ဖော်ပြထားသော "စူပါအင်အားကြီး" များကိုကျွန်ုပ်သတိရလာသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ SO ကိုပိုမိုချစ်မြတ်နိုးပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ ဒါကတစ် ဦး တည်းသောအရာကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောဘ ၀ တစ်ခုကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်သည်။ ”
“ မင်းအရမ်းများလွန်းတဲ့အချိန်တွေမှာစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုမင်းအရမ်းငြီးငွေ့လာတယ်၊ လိင်တူချင်းချစ်တာကိုကြည့်ပြီးလိင်တူချစ်သူကိုလိင်တူချင်းချစ်သူ၊
“ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်၏အကြီးမားဆုံးဥပမာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘဝ၏အရငျးနှီးဆုံးနှင့်အာရုံခံနိုင်သည့်လွှမ်းခြုံနိုင်သောလုပ်ရပ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းနှင့်အသံထက် ကျော်လွန်၍ မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်မှမရှိသော virtual အတွေ့အကြုံကိုအဆုံးမဲ့လျှော့ချပေးသည်။ သင်သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါ။ သင်ဟာလူမှုရေးအရအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာစံနမူနာကိုပြနေပြီး၊ စိတ်ကျေနပ်မှုမရသေးခင်မှာသင်နီးကပ်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုသောစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောလိင်မှုပုံစံကိုသင်လုပ်ဆောင်နေပြီးတဲ့နောက်သင်အခန်းထဲ၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၏“ မကျေနပ်ဖွယ်” အဖြစ်မှန်သို့ပြန်ရောက်သွားသည်၊ တစ်ယောက်တည်း”
“ အဖမ်းခံရချိန်မှာကျွန်တော့်မိဘတွေကကျွန်တော့်ကိုတကယ်အပြစ်မတင်ခဲ့ကြဘူး။ ၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
“ [ငါတို့ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်နှင့်အမျှ] ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနေသောစွမ်းအင်နှင့်အလားအလာအသစ်အားလုံးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှကြီးထွားလာမယ်၊ အဲဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသေချာဘူးဆိုရင်ကြီးမားတဲ့လှိုင်းတံပိုးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးခိုင်ခံ့တဲ့လူတွေကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။ ”
“ ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေကမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မကူးနိုင်ဘူး။ ပြန်လည်နာလန်ထူအချိန်ယူရသည်။ "
“ ကျွန်တော့်ရဲ့ wiener အရွယ်အစားကတော်တော်လေးမကြီးဘူး၊ အားကစားခန်းမမှာအမြဲရှက်တတ်တယ်။ စတာတွေအားလုံးကအားကစားခန်းမမှာကျောင်းမတက်ချင်ဘူး။ ယခုငါသူငယ်ချင်းများနှင့်ရေချိုးပြီးနောက်အားကစားလုပ်ပါ, ထိုသို့လုံးဝလက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံသည်“ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏သေးငယ်သောd** k ကိုရယ်ကြလိမ့်မည်” မှ“ လိင်တံအရွယ်အစားသည်ကောင်းမွန်သောဘဝအတွက်အတားအဆီးမဟုတ်ပါ” သို့“ F-it၊ လိင်စိတ်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောမထင်မှတ်သောအရာများဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့သည့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်ခံခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
“ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့သူတွေဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေတဲ့ပြpornနာတွေရဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်တဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရနိုင်သည်။ သို့သော်များစွာသောလူအများစုအတွက်မူကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်၏ပိုမိုကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းမှု၏အထွေထွေခွင့်ပြုချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာမှပေးသောအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို (သို့ (၃၀) ပင်) ဝေးကွာစွာတိုးချဲ့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဘ ၀ ၌ပျော်မွေ့ရန်အခွင့်အရေးအတွက်ဘယ်တော့မျှတိုက်ပွဲ ၀ င်စရာမလိုသောကြောင့်၊ တင့်ကားထဲတွင်ဆိုင်းထားခြင်းနှင့်ပြွန်မှကျွေးခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်သားများ (အမှန်တကယ်၊ စိတ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းပါပါ ၀ င်သည်) သည်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးသောလှုံ့ဆော်မှုကိုငြင်းပယ်ခံရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တစ်လှမ်းသာဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားရမယ်။ ထိုသို့သောစစ်ဆေးမှုများသည်နာကျင်သော်လည်းလိုအပ်သည်။
“ ကျွန်မဟာမူလတန်းကလေးတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ငါဆွဲငင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားအကြောင်းအရာတွေကိုငါသင်ပေးရင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုမကြည့်မိဖို့တကယ်ကောင်းတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က [ငါ့နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်] ကငါကျောင်းမှာတကယ်ကို ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့တာ” ငြီးငွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်စာသင်ခန်းထဲတွင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်အတွင်းဗီဒီယိုများကိုမှတ်ထားပါ။ GROSSSSSS - ဤစာသင်နှစ်သည် ပို၍ ကောင်းသည်။ ဆက်စပ်မှု - ဒီနှစ်မှာငါ့ရဲ့စာသင်ခန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပိုကောင်းတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါညစ်ညမ်းဓာတ်မတည်အဖြစ် - အခွံမာသီးသို့မဟုတ်ဂျုံကိုမစားနိုင်သူတွေကိုအဖြစ်ငါရှုမြင်သည်။ သူတို့သည်အခွံမာသီးနှင့်ဂျုံတို့ကိုအလွန်အမင်းမကြောက်ရွံ့ကြသော်လည်း၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။ ငါ porn အလားတူသဘောမျိုးကြည့်ရှုပါ။ ဒါဟာအဆုံးစွန်သောမကောင်းသောအမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာငါနှင့်သဟဇာတမဖြစ်သည့်အရာပဲ ဒါအားလုံးပါပဲ
ငါနောက်ဆုံးတော့အစဉ်မပြတ်ငါဖြစ်လိုခဲ့ကြပါပြီပုဂ္ဂိုလ်, ငါဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာနေပါတယ်။ သေချာတာပေါ့, ငါနေဆဲမကောင်းတဲ့ရက်ပေါင်းရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကောင်းသောသူမြားကိုဝေးသဖြင့်သူတို့ကိုမယ်လို့တရုတ်လူမှုသိပ္ပံအကယ်ဒမီ။
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအနှစ် ၂၀ အသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါစိတ်ပျက်မိတဲ့အခါပျင်းလာတဲ့အခါတစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါငါနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေတယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းငါ့အတွက်အမြဲတမ်းရှိခဲ့တယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးငါ့ကိုအချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါအဲဒီကိုသွားတဲ့အချိန်တိုင်းငါထွက်သွားနိုင်အောင်တစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ် - ငါဘယ်တော့မှစိတ်မပျက်ခဲ့ဘူး။ တခါတရံမှာပျော်စရာ၊ အဆုံးမဲ့လင့်ခ်တွေကိုဖြတ်ပြီး၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်လွှားပြီးသူတို့၏ပုံများကိုရှာရန်ကြိုးစားခြင်း ငါရိုင်းစိုင်းတဲ့အနောက်ဘက်ကနေတဆင့်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ပြေးနေတဲ့ရွှေ၊ လူသတ်မှုကိုရှာဖွေနေသလိုခံစားရတယ် ငါအထီးကျန်ဖြစ်တဲ့အခါ, အဲဒီမှာရှိ၏။ ဒါကြောင့်ငါကတကယ်တော့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနားလည်ထားတယ်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အမျိုးသမီးများ၏ pixel ပုံများနှင့်မိန်းမများအကြားခြားနားချက်ကိုမပြောနိုင်ပါက၊ အခြားခံစားချက်များကိုစိတ်ချစေခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ခြင်း၊ အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ထံမှခံစားချက်များကို။ D'oh! ပြောင်းရွှေ့ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့ငါ့နှလုံးထဲမှာဒီအလေးချိန်ရှိတယ်။ ငါကသနားစရာအသံကိုငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်ငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိငါ့ ဦး နှောက်ဟာငါ porn နဲ့ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါကဝမ်းနည်းစရာပါ။ ငါ့ ဦး နှောက်ကိုဝှေးစေ့ထဲမှာကန်လိုက်မယ်၊ ဒါကြောင့်သူကအားကြီးတယ်၊ ဒါကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီခံစားချက်တွေဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုတာလည်းကောင်းတယ်။
ကျွန်မဘရွတ်ကလင်းမှာနေထိုင်နှင့်ကျပန်းလူတွေအမှန်မှာ porn ဖြတ်ကတည်းကလမ်းပေါ်မှ ME နှုတ်ဆက်။ ယင်းကိုမည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲ? NoFap အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဟာသူတို့ရဲ့ matrix ကိုလက်ခံထားတဲ့အစွဲထဲကလူတွေ rip ။
“ ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး - တော်ရုံတန်ရုံလက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ porn - ဟာအခုတော့ NFL ထက်ပိုကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ ငါတို့အိမ်တွေကိုပိုက်လိုင်းဖြတ်တယ် ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းများရရန်နယ်နိမိတ်များကိုအမြဲတမ်းတွန်းအားပေးသည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်စက်ယန္တရားထဲကိုသွားပါ။ ၁၉၉၂ သွားကြစို့။ လူကြီး ၁၀၀၀ ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပါ။ 'မျက်နှာဆိုတာဘာလဲ' ဟူ၍ သူတို့ကိုမေးပါ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအလှအပဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုရည်ညွှန်းကြလိမ့်မည်။ ဒီနေ့မြန်မြန်ရှေ့သို့ အိန္ဒိယမှကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်အမေရိကားသို့ရောက်နေသည်မှာတစ်လခန့်ကြာပြီဖြစ်သည့်“ Facials” ဟုပြောသောအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားသည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီးတော့“ မင်းဒီမှာမင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာမယုံဘူး” လို့ပြောတယ်။ ငါသူ့ကိုတကယ့်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီးရယ်တယ်။ သူကအိန္ဒိယမှာ porn အများကြီးကြည့်ခဲ့တယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းလဲသွားပြီ”
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအကြောင်းပြောရရင်သင်ဟာချိုသာစရာတောင်မလိုပါဘူး၊ ပျင်းဖို့လိုတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကသင့်ကိုကြည်နူးစေလိမ့်မယ်။ "
“ (အသက် ၂၄ နှစ်) အမှိုက်စားအစားအစာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုစနစ်ကို 'ကောင်းမွန်သောခံစားမှု' ဖြင့်အမြဲတမ်းကျွေးမွေးသည်။ ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြန်အစားအစာတွင်နေထိုင်ရန်သင်ကြားပေးပြီး၊ မောက်စ်ကိုကလစ်တစ်ချက်နှင့်အချို့သောလိမ်းဆေးများဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုမဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာသင်သည်သင်၏ဘဝကိုထိန်းချုပ်ပြန်ယူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပြောင်းလဲနေသောအင်အားစုဖြစ်လာလိမ့်မည်နည်း အရေးယူမဟုတ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာရန်? အားလုံးသည် willpower အားတုန့်ပြန်သောအပြုအမူဖြင့်စတင်သည်။ သင်ထိုက်တန်သည်ထက်လျော့နည်းသောအရာတစ်ခုခုအတွက်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိတော့ပါ။ pixelated, airbrushed, frodi အစားလှပပြီးအသက်ရှင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတောင်းဆိုရန်။ သာမန်ဘ ၀ ကိုရှင်သန်မည့်အစားရှင်သန်ရန်။ ၁၅၇ ရက်အတွင်းကျွန်တော်မကြည့်ခဲ့ပါ အခုတော့ငါတောင်မှစဉ်းစားခဲယဉ်း။ ငါ ၈၅ ရက်ရောက်တော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှအစပြုခြင်းမှရရှိသောအပေါ်ယံအကျိုးကျေးဇူးများကိုအကျဉ်းချုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ အကျိုးကျေးဇူးသည်သင်၏ဘ ၀ တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရာများထက်များစွာပိုမိုနက်ရှိုင်းကြောင်းသင့်ကိုအသိပေးရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်ပြန်လာပါမည်။ ဒါဟာနက်ရှိုင်းသောသင်ပုလ် core ကိုသို့ပြေး။ ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်ခြင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အဓိကသော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်လိင်ကိစ္စကိုအသုံးမပြုတော့လျှင်၊ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုသည်သင့်အားဖွင့်ပေးသည်။ မင်းအရင်ကမကြုံဖူးခဲ့တဲ့ဘဝမှာလွတ်လပ်မှုရှိတယ်”
“ သင်အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီးနောက်၊ ရဲ့ သင်အမှန်တကယ်ကဘာလဲဆိုတာသင်မြင်သောအခါ။ "
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနဲ့ချက်ချင်း ၀ မ်းသာစရာကောင်းတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကလိင်စိတ်ဆန္ဒကိုအမြင်အာရုံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ တကယ်တော့ GOOD SEX ဆိုတာခံစားမှုအကြောင်းပါ။ ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ သင်ဤစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအငတ်ပြတ်သောအခါသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကယိုယွင်းသွားသည်။ ဒါဟာလိုက်တယ် / ခန့်မှန်းရခက်အပြုအမူ၏အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝဖြစ်တည်မှုနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်အားလုံးသည်ဘဝ၊ ကမ္ဘာ၊ အိပ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းတို့တွင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်မှော်ဆေးမဟုတ်ပါ။ သင်၏ပြproblemsနာအားလုံးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ သို့သော်ကျန်းမာသောအလေ့အထအနည်းငယ်နှင့်တွဲဖက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၏ဘဝကိုကောင်းမွန်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ရှင်သန်နေသည်သာမကရှင်သန်ရုံသာမကသင်ရရှိသည့်ခံစားချက်ထက် ပို၍ ပြည့်စုံသောအရာမရှိပါ။ ”
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုဟန်ချက်ညီစွာမပစ်ရန် (မရည်ရွယ်ဘဲ) တိုက်တွန်းသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုကျေနပ်မှုမရှိဘူး။ နောက်ဆုံး၌စိတ်လှုပ်ရှားစရာသာလျှင်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးစွမ်းပြီးအခြားအရာအားလုံးသည်ပျင်းစရာကောင်းပြီးပျင်းစရာကောင်းပုံရသည်။ တစ်နေ့နေ့မှာဒီဟာဘုံအသိပညာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့လိင်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိုက်မဲတဲ့ဆွေးနွေးမှုအားလုံးကိုရပ်တန့်ပစ်နိုင်တယ်။ ဦး နှောက်ဟာမျှတမှုကင်းမဲ့နေရင်စစ်မှန်တဲ့လိင်လွတ်လပ်မှုဆိုတာမရှိပါဘူး။ ”
“ SSRIs အတွင်းမှာနေပြီးတစ်ယောက်တည်းနေလို့ရမယ်၊ မင်းရဲ့မူလနောက်ဆက်တွဲနဲ့အတူစိတ်ကူးယဉ်နတ်သမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်။ လူတွေကဒီလူတွေကိုရှက်တတ်သူ၊ လူဆိုးလူမိုက်လို့တံဆိပ်ကပ်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာကပ်ရောဂါတစ်ခုရှိတယ်ထင်တယ် ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး သာမန်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာဟာမလွယ်ကူတော့ပါ။ လူတိုင်းကသင်၏ပြawayနာများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်” သို့မဟုတ်တစ်ခုခုသာဖြစ်ကြောင်းလက်ခံလာကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အတွက်မိုက်မဲသည်ဟုထင်သောလူအချို့ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ သို့သော်ထိုသူများသည် Legends of Legends နာရီများ၌နာရီပေါင်းများစွာကစားနေစဉ်၊ သူတို့ရည်းစားလိုအပ်နေပုံကိုလှောင်ပြောင်သရော်ခြင်း၊ စိတ်ကျရောဂါ။ ဒါကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုငါမုန်းလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကို ဦး တည်သွားမယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ ငါအချိန်ဆွဲ, အိမ်မှာနေနှင့်ငါ့အထီးကျန်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ချင်သလောက်, ငါကဒီကိုတိုက်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒြပ်စင်ဖန်သားပြင်ရှိလေယာဉ်မှကင်မရာထက်တောင်ထိပ်မှမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရဲ့အင်တာနက်ရည်းစားအတုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးတယ်။ ငါတို့မြည်းကြည့်ခြင်း၊ ထိမိခြင်း၊
“ အသက်ရှင်ခဲ့သမျှလူသား ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော့်ဘ ၀ ရဲ့အခြေအနေတွေကိုဗြိတိန်နိမ့်လူလတ်တန်းစားအိမ်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းမကုန်နိုင်သောဇိမ်ခံမှုနှင့်အခွင့်ထူးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ကံကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဓားနှစ်ချောင်းရှိတယ်။ သငျသညျ၏နိယာမမှစာရင်းသွင်းလျှင် Hormetism ထို့နောက်သင်သည်လူ့ဇီဝသက်ရှိသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုကိုကောင်းစွာတုန့်ပြန်သည်၊ ခွန်အားလေ့ကျင့်ခြင်း၊ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်း၊ Junk food၊ အထိုင်များသည့်လူနေမှုပုံစံနှင့်တစ်နေ့လျှင် ၅ နာရီခွဲ COD သည်သင့်အားအားနည်းစေပြီးသင့်ကိုနဂိုအတိုင်းမရှိသော flaccid jellyfish ဖြစ်လာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးဆုံးရှုံးခြင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစပိုင်းတွင်မသက်မသာခံစားရသော်လည်းအပြုသဘောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းထက်မကပိုများသည်။ ”
“ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကမေးရင်၊ ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တာ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေမလုပ်တော့ဘူး” လို့ရိုးရိုးသားသားပြန်ပြောလိုက်တယ်။ 🙂
“ အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းတွေရနိုင်တာကတကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်။ သူတို့နဲ့အမြဲတမ်းလိင်အကြောင်းမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ငါစွဲလမ်းစဉ်ငါကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတွေကန့်ကွက်ခြင်းမရှိတော့ပါသဘောပေါက်လာတယ် အဖေကသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်သမီးတွေကိုညစ်ပတ်စေတာကိုဖက်လိုက်တာကိုစိတ်မပူတော့ဘူးဆိုတဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုငါကြားခဲ့ရတယ်။ ထိုမျှမကကျွန်ုပ်၏သမီးသူငယ်ချင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မလိုပါဒါအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းမှာသမီးတစ်ယောက်ရှိပြီဆိုရင်၊ ခင်ဗျားရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပေါ်အမြင်အားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ။ ”
“ သူတို့က TEDx vid ကိုအထက်တန်းကျောင်း sex / PSE အတန်းတွေမှာပြသင့်တယ်။ ငါနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အိမ်ထောင်ဖက်များသည် STD ရောဂါကူးစက်ခြင်းထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲကပ်ခြင်းများကိုခံနိုင်ခြေပိုများကြောင်းသိပါတယ် "
[အမျိုးသမီး rebooter] ယနေ့ခေတ်စိတ်ပညာဆောင်းပါးကိုဖတ်နေရင်းမိဘများသည်ကလေးများ၏ပြproblemsနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒါကမကောင်းဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူဖို့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရဖို့လိုတယ်။ ဒါကလူကြီးတွေအတွက်လည်းဒါအမှန်ပဲ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုဆန္ဒပြည့်ဝစွာချက်ချင်းစားလေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အဆင်မပြေမှုကိုသင့်လျော်စွာကိုင်တွယ်ခြင်းမှအဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မည်။
ကျောင်းမှာသူတို့ကသစ်သားခုတ်လှဲတာ၊ ပဝါချတာ၊ ရွှံ့အိုးလုပ်နည်းလုပ်နည်းသင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော့်နေ့စဉ်ဘ ၀ အတွက်ဒီစွမ်းရည်ကိုမလိုအပ်ဘူး။ ကိုယ့် ဦး နှောက်နှင့်စိတ်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့သင်ယူနိုင်တဲ့အာရုံကြောသိပ္ပံသင်တန်းတစ်ခု၊ နှစ်ခုရှိတာကကောင်းပါတယ်။ သေရော။ ဒါက ၁၃ နှစ်မှာဒါကအင်အားကြီးတယ်။
နေ့ 4: Porn အမေရိကန်အိပ်မက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို့ကိုရောင်းလိုက်တာကတိုင်းပြည်ကအိမ်တစ်အိမ်ဖြစ်ပြီးလေထုတွေအများကြီးရှိပြီးလေထုညစ်ညမ်းမှုအားလုံးကကင်းဝေးပါတယ်။ လူအုပ်၊ ကိုင်တွယ်သူ၊ မြေးများ၊ ညစ်ပတ်သောလမ်းများ၊ မီးခိုးမြူ၊ ယာဉ်ကြော၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ငါတို့ Mustang အဟောင်းကိုအလုပ်လုပ်ပြီးခွေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများခြံထဲတွင်လွတ်လပ်စွာပြေးနိုင်သည့်နေရာ။ ကျွန်တော်တို့ဟာသစ္စာရှိစွာချွေတာနေသရွေ့သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်အငြိမ်းစားယူခြင်း။
အဲဒီအစားကျနော်တို့ဘာမျှမချဉ်းမကပ်ကားတစ်စီး-မှီခိုရပ်ကွက်မြှပ်နှံထဲမှာ spec အိမ်များနှင့်စျေးပေါ McMansions တယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှပေါ်ထိုင်ဖို့သေးငယ်လွန်းတံခါးတယ်။ ကျနော်တို့ ADHD, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူထူပြောနေတယ်ကျောင်းမှာစနစ်များမျှသာတယ်။ ကျနော်တို့အစားအစာများနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာများနှင့်အလွန်းသကြားနှင့်လည်းနည်းနည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ငန်းများ၌တယ်။ ကြှနျုပျတို့အစာစားခြင်းခံခဲ့ရသည်မေ့တိရစ္ဆာန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်တူ shaped Patti ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အငြိမ်းစားအဖြစ်ကောင်းစွာကဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်, စျေးကွက်ကအစစ်အမှန်တစ်ခုခုတစ်ခုအတုသည်အဘယ်အရာများအတွက် suburbia မြင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရှပ်အင်္ကျီကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်၊ porn သည်အမေရိကန်အိပ်မက်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားရောင်းချခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တာကလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းပဲ။ ကျနော်တို့စိတ်ကျေနပ်မှုချင်တယ်နှင့် porn လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်းရဲ့လိဂ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောတာကပိုလွယ်တယ် (ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်သူတို့အားလုံးမဟုတ်လား။ ) မင်းကိုမင်းကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ထိုးနှက်နိုင်တဲ့မင်းဒါမှမဟုတ်မင်းထက်ပိုကြီးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိနိုင်တယ်။ ဘာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ အကယ်၍ သူသာတန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင်စောင့်ဆိုင်းမှုအတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာသူသိလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကတန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင်မင်းကိုစောင့်နေစေမယ့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုစက္ကန့်နှစ်လလောက်စောင့်ရလိမ့်မယ်။
အဲဒီအစားကျနော်တို့ချက်ချင်းကျေနပ်မှုရတယ်။ ငါတို့သက်သာရာရပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတစ်ခု၊ တကယ့်တစ်ခုခုနဲ့တူသလိုခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ခု - ငါတို့အရင်ကသိခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ငါတို့သာစိတ်ကူးဖူးတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရိုးသားသားအိပ်မက်များသည်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အချိန်ထက်ပိုကြီးပြီးပိုကောင်းလာသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကောင်းမွန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏နှုတ်ခမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏နားထဲသို့တိုးတိုးပြောသောစကားလုံးတစ်လုံးမျှထက်ပင်အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ သို့တိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ခဏအကြာမှာအခြေအနေတွေစတင်ဖြစ်လာတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုသိပ်မတော်ဘူး၊ မလုံလောက်ဘူး။ ပြီးတော့ငါတို့နောက်ထပ်သုံးတယ် PE သို့မဟုတ် ED ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့တီဗွီကိုကြည့်နေတာလား၊ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကနေအာရုံပျံ့လွင့်လို့ငါတို့ဇနီးတွေ၊ မိန်းကလေးတွေအိပ်ရာဘေးမှာထိုင်ခိုင်းတယ်။ စစ်မှန်သောရင်းနှီးမှုနှင့်တူသည်ကို၎င်းတို့အားမေ့သွားသည်။ တစ်ဖန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမေ့သွားသည်။ ကျမတို့မိသားစုကခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့အပြစ်တင်န်းကျင်ပစ်စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအထင်ကြီးလေးစားမိတယ်။
သတင်းကောင်းမှာအခြားသူများမှတ်မိနေသေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိအမှောင်ကျနေသောနေရာများ - ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ရှာဖွေရန်မကြာခဏကြောက်လန့်သောနေရာ - ကျွန်ုပ်တို့လည်းပြုလုပ်ကြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပြီးခါနီးတွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်ပြိုလဲသွားသည်ဟူသောခံစားမှုသည်မည်သည့်ဆေးဝါးထက်မဆို ပို၍ ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ အလုပ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းကျိုးကိုရိတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုငါတို့သိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်မည်သည့်ကားထက်မဆို ပို၍ အဖိုးတန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရဟိတလုပ်ငန်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည်မည်သည့်ပစ္စည်းထက်မဆိုပိုမိုကြွယ်ဝစေသည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်သည်ရုပ်မြင်သံကြားထက် ပို၍ ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်အခြားသူများကိုမျက်လုံးထဲမှတောက်ပစွာကြည့်နေသကဲ့သို့မည်သည့်အခါမျှဆိုလိုမည်မဟုတ်ပါ။
ထိုအပင်ကိုအများဆုံးညစ်ညမ်း-စွဲငါတို့တှငျသိတယ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအသက်ရှုဆွဲနိုင်ခြင်း, သူကွယ်လွန်သည့်အခါသူမပြင် ecstasy အတွက်အော်ဟစ်အဖြစ်သူမကိုင်ထား၏, သူနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကျေနပ်၏မှတ်ဉာဏ်ယူလိမ့်မည်သမျှဘုရားဖို့မျှော်လင့် ။ ဒရုံသူမ၏ဘေးတွင်လဲလျောင်း။ သူမ၏ဆံပင်မှတဆင့်သည်သူ၏လက်ချောင်းများ running ။
TL, DR; အမေရိကန်အိပ်မက်များ၏ပစ္စည်းထောင်ချောက်လိုပဲ, Porn အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးကြောင်းရှိခြင်းသူကပြောတယ်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုတဲ့စျေးပေါသော, shitty အတုဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ လူသားအားလုံးသည်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အထိ Porn up ကို surfing မလိုအပ်ခဲ့ပါကသေချာသည် - ကျွန်ုပ်တို့လည်း၎င်းကိုမလိုအပ်ပါ။
“ အချို့သောစုံတွဲများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ၎င်းသည်ယနေ့အချိန်တွင်အလွန်အမင်းစွန့်စားရမှုမရှိသောအခမဲ့၊ လက်ငင်းနှင့်ပိုမိုပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆိုလိုသည်။ အချို့လူများကသူတို့၏ဘ ၀ သည်ပြိုကွဲခြင်းမရှိဘဲညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးနိုင်သည်၊ အချို့လူများကသူတို့၏ဘ ၀ များသည်လည်းပြိုကွဲခြင်းမရှိဘဲကိုကင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းအားအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုလူတိုင်းအားသတိပေးရန်ငါသွားမည်။ အတိတ်မျိုးဆက်သစ်စုံတွဲများသည်သမိုင်းကြောင်းအရညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးချရန်ညစ်ညမ်းသောဓလေ့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောသားရဲအသစ်နှင့်အတူ၊
Nofap ကြောင့်လူကောင်းတွေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး ။ မည်သည့်ဆောင်ပုဒ်ကိုသဘောပေါက်? သူတို့ဟာဆေးစွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးပိုကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာကြတာပါ။ ဒါစိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်လား အမျိုးသားလူ ဦး ရေ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းမရှိသောကြောင့်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုမည်မျှအထိထိရောက်နိုင်သည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
၎င်းသည်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ပင်သက်ဆိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ လူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့ပညာရေးကို“ အသုံးစရိတ်မရှိခြင်း” ဒါမှမဟုတ်“ ကျောင်းပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း” လို့အမြဲအပြစ်တင်ကြပါတယ်။ NoFap ကိုစဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းမှာပိုကောင်းအောင်မစွမ်းဆောင်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကိုမင်းသိလား။ အဘယ်သူမျှမစွဲလမ်းမြောင်းသောအခါလူတိုင်းကျောင်းမှာပိုကောင်းတယ်။ အကယ်၍ ကျောင်းသား ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုအလဟ were မလုပ်မိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းများမည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့အားများပြားစွာဆုံးရှုံးနေရသည့်အရာမှာတိုက်ပွဲ၊ ရုန်းကန်ခြင်း၊ ဘဝကိုကျော်လွှားခြင်း၏ရွှင်လန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုက်ဆာတယ် drive-thru အတွက်အချို့သောစျေးပေါလုပ်ငန်းများ၌ကင်လုပ်ခိုင်းဖမ်းပြီး။ ငြီးငွေ့? သင်၏လေအေးပေးစက်တပ်ထားသောအိမ်တွင်သင်၏မှတ်ဉာဏ် - အမြှုပ်မွေ့ထားပါ။ မင်္ဂလာပါ ဝဘ်ပေါ်ခုန်နှင့်တ ဦး တည်းထွက်ပွတ်ပေးပါ။
“ ကမ္ဘာကြီးကိုညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းနေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဤအတောအတွင်း၊ အစစ်အမှန်ဘဝ၌၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်လိင်အလွန်အလုပ်များလွန်းသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်လူသားတစ် ဦး ကဲ့သို့အမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရသောတကယ့်လိင်ဆိုင်ရာအလှအပအားလုံးကိုတုံ့ပြန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အစစ်အမှန်ဘဝလှပသောမိန်းကလေးများသည်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စများမဟုတ်တော့ပါ။ လှပသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူသာသနာပြုအနေအထားကဲ့သို့သောပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စ (ကျွန်ုပ်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ရန်ခက်ခဲသောအရာများ) ကျွန်ုပ်သည်တွေးတော့မည့်အရာများမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လှပသောစိတ်နှင့်တူသည်၊ ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်အားကျန်းမာသန်စွမ်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းအားဖြင့်သေစေသည်ဟုမြင်ယောင်စေသည် ... အဲဒီမှာညစ်ညမ်းတဲ့အခမဲ့ဘဝပုံစံကိုဟောတဲ့လူတစ်ယောက်တကယ်မရှိဘူး၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဒါကငါ့ကိုစိတ်ပျက်စေတယ် ပျော်ရွှင်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုများသည်ဘယ်သောအခါမှကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ရှေ့မှာဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းယခုငါသိပြီ။ ကျွန်ုပ်၏မကြာသေးမီကကြုံတွေ့ခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကိုမျှော်လင့်မိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောဘ ၀ ကိုရှင်သန်နိုင်ရန်ခွန်အားကိုရှာဖွေပေးမည်
“ တစ်ခါတလေအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဘယျသို့ကြောင့်မှားလား သငျသညျဆိုသညျကားစေနိုင်သည်။ လူတိုင်းကိုအနည်းငယ်ထွက်ပေါက်လိုအပ်ပါသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသဘာဝပါပဲ။ သင်ကရံဖန်ရံခါလွှတ်ပေးလိုအပ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ အဲဒီစိတ်သဘောကိုကျွန်တော်သေချာပေါက်သဘောမတူပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် dope-addled daze ထဲကိုနာရီပေါင်းများစွာအကြာကြီးကျသွားတာမျိုး၊ ထွက်ပေါ်လာဖို့မေးခွန်းထုတ်စရာအကြောင်းအရာတွေကြည့်နေစဉ်မှာလည်းမကြာခဏဖြန့်ချိတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့မယုံဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာလိုချင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးမှာတော့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အရာအားလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးဒီရောဂါကကျွန်မကိုဝမ်းနည်းစေခဲ့ပေမယ့်လည်းအခြားသူတွေနဲ့ဘဝကိုကျွန်မရဲ့ရှုထောင့်ကတကယ်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ လိင်သည်လက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါသေချာပေါက်ခက်ခဲလမ်းကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။ "
"ဒါကအရမ်းဝမ်းနည်းဖွယ်ပဲ! ယောက်ျားတွေကဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခေတ္တရပ်နားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမခံစားရလို့စဉ်းစားရတာစိတ်ပျက်စရာပါ။ ဒါဟာပတ်ပတ်လည်လှည့်မရနိုငျသောပြproblemနာတစ်ခုကဲ့သို့ခံစားရ၏။ ငါဟာအရာရာကိုနှစ်ဆယ့်တစ်ရာ့တစ်ရာပဲ။ ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးအကူအညီမဲ့တာမျိုးခံစားရတယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုကနေသတင်းတွေမရရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်။
မင်းကိုတွေ့နိုင်တာကငါဟာ ၁၀ ရက်မှာငါရောက်နေပေမဲ့ငါ nofap လမ်းမှာရောက်နေတာကြာပြီ။ ဒီအချိန်တွေအားလုံးကအမျိုးသားတွေဟာ porn နဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိစေတယ်။
ထိုအခါငါတွေ့ရှိခဲ့: ငါတို့အများစုသိကြသကဲ့သို့, လူသားဖြစ်ခြင်းအမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုသူမျိုးပွားနိုင်အောင်ပိုကောင်းလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက် porn ပေါ်လာတာကအရာရာတိုင်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ။ အခုဆိုရင်ဘယ်သူမဆိုလှည့်ဖြားနိုင်တယ် ဦး နှောက်ဖြစ်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးသောရည်မှန်းချက်ကိုရနိုင်ပြီးသင်ရှုပ်ထွေးသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားလျှင်ပင်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါက၎င်းသည် PMO ၏အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လာ? ဘာကြောင့်ဖန်တီးပြီးတီထွင်ရတာလဲ
ဒါကကျိန်းသေနေသမျှကာလပတ်လုံးငါ၏အအလိုတော်-ပါဝါအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ် porn ငါ့ကိုပယ်တယ်! ကံကောင်းပါစေ fapstronaut ငါတို့ဘဝတွေကိုကနေညစ်ညမ်းဖကျြဆီးနိုငျ !!
ps: အင်္ဂလိပ်ဟာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးဘာသာစကားမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်တော့်ကိုပြင်ဖို့စိတ်မပျက်ပါနဲ့
တော်လှန်ရေး / ပုန်ကန်မှုအဖြစ် Nofap
ငါညစ်ညမ်း (နှင့် passionless လိင်) ထုံနှင့်ပျင်းဖို့ဦးဆောင်, လူ့လိင်နှင့်စွမ်းအင်အပေါ်တစ်ဦးကျယ်ပြန့်ထုံဆေးအဖြစ်ပြုမူကြောင်းထင်ခြင်းငှါလာကြပါပြီ။
ဒီရလဒ်အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းတွေထက်သဘာဝကလူ့ဗီဇအတိုင်းလုပ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဤတုန်လှုပ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးသည်စိတ်အေးချမ်းစေသောလူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများထပ်မံသုံးစွဲခြင်း၊ နိုင်ငံရေးသမားများအပေါ်စိတ်မ ၀ င်စားခြင်း (သူတစ်ပါးထံမှခိုးယူသကဲ့သို့သူတို့၏အလုပ်၏အဓိပ္ပာယ်မဲ့မှုကိုညွှန်ပြနိုင်ခြင်း) သို့ ဦး တည်စေသည်။
ထုံခြင်းကြောင့်လူမှုရေးအပြုအမူအဆုံးသတ်သွားခြင်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုမှောက်လှန်စေသောသင်္ကေတစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းသို့ ဦး တည်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ကျယ်ပြန့် porn ၏မျက်နှာကိုအတွက်သဘာဝလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇ Rejuvenating ညီဆန့်ကျင်, ပျင်းဆန့်ကျင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပအံ့သြဖွယ်အသက်တာကိုအားယုတျညံ့သောအဆုံးမဲ့အဆိုးမြင်ဆန့်ကျင်, သင်သူပုန်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အများသုံးဝေဖန်သူနှစ် ဦး နှင့် YOUTube မှ“
Marvin de Sade ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများထက်ပိုမိုသောစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အစဉ်အမြဲဖိတ်ကြားထားခြင်းကြောင့်ဆာဗားနားရှိမျိုးနွယ်စုအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားရံဖန်ရံခါမြင်တွေ့ရခြင်းထက်လိင်ဆိုင်ရာသွေးဆောင်မှုနည်းပါးစေရန်ကိုင်တွယ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်စိတ်ကိုအကူအညီမဲ့စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာစွမ်းရည်တိုးတက်မှုများကိုလျော်ကြေးပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံတွင်အားနည်းလောက်သောအရာမရှိသေးပါ။ (နောက်ထပ်လေးနာရီခန့်ဖြစ်နိုင်သည်) သည်အခြား ဦး စားပေးအရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်သည့်ဆန္ဒကိုဖမ်းဆီးရန်ဘာမျှမရှိပါ။ ဝဘ်၏မဲမှောင်အောက်ဆုံး။ Porn သည်အလွန်လျင်မြန်ပြီးပြင်းထန်သောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူသားနှင့်အမှန်တကယ်လိင်၏အဓိကကျသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုဖျက်ဆီးသည်။ [Porn သည်] အချို့အတွက်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ အဲဒါကဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ” -Alain က de Botton
“ ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဟာသတ္တိကောင်းတဲ့ကမ္ဘာသစ်ဖြစ်ပြီးနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်မှုက dopamine receptor ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့လိုနေသမျှကာလပတ်လုံးပဲတည်နေမှာပါ။ ” -DL ဟီလ်တန်, MD
NoFap အစဉ်အဆက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသွားလိမ့်မည်နည်း (Reddit ဆွေးနွေးမှု)
အဆိုပါနေ့ကမ္ဘာမြေ Masturbating ရပ်သွား (ရုပ်ရှင်နောက်တွဲယာဉ်)
လူရွှင်တော်က Chris Rock က porn မလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ် (ရေဒီယို show ကိုကလစ်)
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုpost-Porn ယဉ်ကျေးမှု (2012)"
12 မှာ 10 / 2012 / 9: 51 ညနေ
သီအိုရီ: Dopamine လှုံ့ဆော် fapping မဟုတ်, အမှန်တကယ်စွဲဖြစ်ပါသည်
သီအိုရီ: Dopamine အမှန်တကယ်စွဲဖြစ်ပါသည်, မဟုတ် fapping တခြားနေရာ dopa သင့်ရဲ့ထိုးရရန်သင့်အားလှုံ့ဆျော။
ဟုတ်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုဘေးဘားမှာထားစေချင်တယ် 'testosterone ဒီနည်းကိုနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်'' ။
သင် dopamine fix ကိုအခြားအသုံးဝင်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်တစ်နေ့လျှင် ၁၀ နာရီနာရီကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်တီဗွီကြည့်ခြင်းကဲ့သို့အစားထိုးနိုင်သည်၊ အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်အခြားထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီမှာလူများစွာဟာ PMO နဲ့တစ်နေ့ကိုနာရီပေါင်းများစွာပြင်းထန်သောပြhaveနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဒါက dopamine sensitivity ကိုလျှော့ချဖို့အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာ PMO နဲ့ပြslightနာအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်၊ အရှုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ငါးကြီးများအတွက်ငါးဖမ်းရန်အတွက်ငါးကြီးများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအင်တာနက်ပေါ်သို့ပြေးထွက်သွားကြမည်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် VS ၁၀ နာရီ (နာရီ၊ နာရီ၊ နာရီဝက်) PMO (သတိထားပါ၊ တေးဂီတ၊ အသေးအဖွဲ၊ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့) မင်းအတွက်အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာကငါ့အတွက်ထင်ရှားနေပုံရတယ်။
လူအများစုတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မောင်းနှင်မှုကိုအဘယ်အရာကကူညီနိုင်မည်နည်း။ သင်၏အဓိကဖျော်ဖြေမှုသည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းများဖြစ်ရန်အလျင်အမြန်ပြည့်စုံသောနည်းပညာဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော် reddit များသောအားဖြင့် 'နည်းပညာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ၎င်းကိုစနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအသုံးမပြုခြင်း' အတွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့တွင်ဖွင့်ထားသည့် tabs ၂၀ ရှိပြီးစာကြောင်းနှစ်ခုထက်မကဖတ်နိုင်ခြင်း။
ငါကြွက်နှင့်မျောက်သူတို့ခလုတ်ကိုထိမှန်တဲ့အခါမှာထိခိုက်တယ်သူတို့၏ dopamine receptors မှတက်နှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့ခလုတ်, ပေးထားသောနှင့်အစားအစာသို့မဟုတ်အသစ်ကအမျိုးသမီးထက်ပိုခလုတ်ကိုမေတ္တာရှင်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သောတှငျငါအကြောင်းကိုဖတ်ပါအချို့လေ့လာမှုများ, သတိရပါ။ အဲဒီ button ကိုအခုအချိန်မှာသင့်ရဲ့လက်ချောင်းအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
12 မှာ 17 / 2012 / 5: 49 နံနက်
ဤသည်ယာယီနာကျင်မှုသည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ကြွယ်ဝသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည် ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ရက်ပေါင်း ၉၀ သာရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မည်မျှသင်ယူသည်ကိုမယုံနိုင်ဘူး။ ငါဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ၊ ငါစီမံကိန်းအသစ်တွေငါ့ဘ ၀ ရဲ့နေရာတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တာကိုငါစပြီးမယုံနိုင်ဘူး။ စွမ်းအင်တွေဆုံးရှုံးသွားပြီးမျှော်လင့်ချက်နိမ့်ကျတဲ့အချိန်တွေမှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားတာကိုငါမယုံနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး စားပေးမှုများမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည့်အချိန်ဖြုန်းတီးသောလုပ်ဆောင်မှုများသည်မပြည့်စုံဘဲအဓိပ္ပာယ်မဲ့ပုံရသည်။
12 မှာ 17 / 2012 / 8: 57 ညနေ
YBR FROM မှ
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က ထပ်မံ၍ ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး PMO ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါဒီ porn လှုပ်ရှားမှုသည်အနတ္တနှင့် bullshit တစည်းဖြစ်သည်ကိုဘယ်လိုစစဉ်းစားခဲ့တာလဲ၊ သင် porn နှင့် fap ဖြစ်လာသောအခါပူအ ၀ တ်မပါသောကြက်ကလေးများမရေမတွက်နိုင်အောင်အံ့သြစရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ငါဆက်အသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါ့ဘဝဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ရှေ့မှာကျွန်တော့်အသားကိုရိုက်ပြီးကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကုလားထိုင်ပေါ်ခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ ဝက်အူ!
12 မှာ 21 / 2012 / 10: 11 ညနေ
Form ကို fetish porn site ကိုပိုင်ရှင်
ဒီအလေ့အထကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်၊ လိုအင်ဆန္ဒတွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မရှိသောအလိုဆန္ဒများကိုဤအလေ့အထနှင့်အစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်တိုးတက်မှုအစားဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားသည့်အခြေအနေတွင်သာရှိသည်။ …
ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများကကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝကိုမအောင်မြင်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်တည်ရှိမှုကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ငါကျိန်စာခံခဲ့ရသည်ထင်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ့စိတ်ကူးကိုလက်ခံပြီးအတူကစားလိုစိတ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာမှမလိုချင်ဘူး။ …
ကျွန်မစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောဘဝနှင့်တည်ငြိမ်ဝင်ငွေထားခဲ့လေ၏။ အဘယ်ကြောင့်? ငါစိတ်ဆင်းရဲနှင့်မပျော်ခဲ့လို့ပဲ။ ငါ fetish site ၏ပိုင်ရှင်နှင့်ပါဝင်သူခဲ့သော်လည်း။ ငါလှပသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်မဆိုအမျိုးအစားအတွက်ရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်နေ့ကထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်နှင့်ပေါင်းငါလှပတဲ့ရည်းစား (နောက်ပိုင်းကျွန်တော့်ဇနီး) ရှိခဲ့ပါတယ်, ငါ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လက်ခံခဲ့သည်နှင့်လည်းငါ၏အစိတ်ကူးယဉ်မဆိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပျော်ရွှင်သူ။ အဲဒီအစားကိုယ့်နေဆဲငါငါ့ဥစ္စာထက်အခြားဆိုက်များပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သောအကြောင်းအရာအများအပြားအခါသမယအပေါ်နေ့တိုင်း masturbated နှင့်။ အဘယ်ကြောင့်?
ငါစွဲခံခဲ့ရသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်ရှိသည်နှင့်ထို့နောက်နေဆဲနောက်မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ငါသည်နံနက်အချိန်၌ငါဖြစ်ခဲ့သည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစဉ်းစားမယ်လို့ပထမဦးဆုံးအရာအတွက်နိုးထလိမ့်မယ်။ ငါရိုက်ကူးဘို့ပုံစံ, ပြီးတော့တူညီတဲ့ရိုက်ကူးဖို့ပေမယ့်ဗီဒီယိုအပေါ် masturbate လိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား, စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဓာတ်ကျ, မဆိုဘဝမှာစွမ်းအင်တွေပျက်စီးမှုနှင့်စိတ်ဆိုးငါ့ကိုထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်အလုပ်မလုပ်ဘူး, ငါသည်ဖြောင့်, ငါ့မှတ်ဉာဏ်မကောင်းတဲ့ထင်နိုင်ဘူး။ constant တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, အိပ်ရာ၌ငါ့စွမ်းဆောင်ရည်ငါ၏အစိုက်ထူထိခိုက်ပါကအမျိုးသမီးများနှင့်ခြုံငုံကလူနဲ့ငါ့ဆက်ဆံရေးထိခိုက်, ငါ့ကိုကြောက်လွန်ရောဂါတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
ယခုငါ 30 နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအခမဲ့မိပါတယ်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံး 11 ၏အသက်အရွယ်မှာလုပ်နေတာစတင်ခဲ့ကတည်းကငါသွား၏အရှည်ဆုံးဖြစ်သောယခုနီးကပ်တစ်နှစ်မှ masturbated ကြပြီမဟုတ်။ ငါကဘယ်လိုလုပ်လုပျခဲ့သလဲ ငါ သင်နှင့်အတူငါ့အဇာတ်လမ်းကိုဝေမျှ ထိုသို့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရန်သင့်လမ်းပေါ်တွင်သင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
12 မှာ 22 / 2012 / 4: 49 နံနက်
Alain က de Botton မှ ပို.
ဤသည်မှာဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်လွတ်လပ်စွာ 'ခေတ်သစ်' အဖြစ်ဆက်ရှိနေနိုင်သည့်သူတို့၏ယုတ္တိကျသောကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်၌လိင်အပြည့်အ ၀ စွမ်းအားကိုမခံစားသောလူများသာဖြစ်သည်။ လိင်မှုကိစ္စလွတ်မြောက်ရေးအတွေးအခေါ်သည်အများအားဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးသည်နှင့်သူတို့လုပ်လိုသောဖျက်ဆီးလိုစိတ်၊ သို့သော်၊ ယေဘူယျအားဖြင့်လိင်စွမ်းအားနှင့်အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးများကိုပြောင်းလဲရန်မည်သူမဆိုလွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ညစ်ညမ်း, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးများကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့ကိုစနစ်တကျကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုညွှန်ကြားရန်အဘို့အလိုအပျသညျ့ဖြစ်ကြောင်းဆငျးရဲဒုက်ခ၏မျိုးခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအားနည်းနေခြင်း။ အထူးသဖြင့်, ထိုနှစ်ခုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးကုန်ပစ္စည်းများ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ပျင်းသည်းခံဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်လျော့နည်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ခံစားမှုအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်တစ်ခုခုလွဲသည် ဖြစ်. , ဒါသူတို့စကားကိုနားထောငျနှင့်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အနက်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအချက်ပြမှုများကိုထွေး - ငါတို့သည်အစဉ်အဆက်ကိုတီထွင်အာရုံ၏သြဇာအာဏာအရှိဆုံး tools များထဲကတစ်ခုလက်ဖို့ရှိသည်သည့်အခါဖြစ်ပျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်၏။ တစ်ခုလုံးကိုအင်တာနက်ကကျနော်တို့ခုခံတွန်းလှန်ဖို့မပင်စွမ်းရည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်လိုအပ်ချက်နဲ့ဘာမှရှိအများအပြားရာလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချပို့ဆောင်ပေးသောစနစ်တစ်ခုရှိသည်သောအဆက်မပြတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကယ်တင်ဖြစ်ပါသည်, တစ်နည်းညစ်ညမ်း၌တည်ရှိ၏။
ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းကြှနျုပျတို့၏စိတျကောင်းသောစိတ်ကူးများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အတွက်အာကာသကျနော်တို့ရေချိုးတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးရှည်လျားသောမီးရထားခရီးတွေ့ကြုံခံစားဖန်တီးမှုပျင်း၏မျိုးပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်သောပျင်း၏ကြင်နာဘို့ငါတို့သည်းခံအားနည်းနေခြင်း။ ငါတို့သည်သူထံမှမှလွတ်မြောက်ရန်အနေနဲ့တွန်းလှန်ဆန္ဒခံစားရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသတိမှယူဆောင်လာရန်လိုအပ်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုရှိကွောငျးခနြိုငျကြောင်းအချိန်လေးမှာဖြစ်ပါသည် - နှင့်သေးသောကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းက၎င်း၏အဆိပ်အတောက်တည်းဟူသောအားထုတ်တဲ့အလေ့အထရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ဝန်ဆောင်အချိန်လေးမှာတိကျစွာဖြစ်ပါသည် ဆွဲထုတ်, အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖျက်ဆီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခြင်း
01 မှာ 04 / 2013 / 6: 36 ညနေ
[porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေထွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း] တစ်ဦးမှော်ဆေးလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ငါစစ်မှန်သောနှင့်ပြည့်စုံသောသူသည်ဖြစ်ခြင်း၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများပဲတစ်ဦးအဖြစ်ရှုမြင်ကြပါတယ်။ ငါနောက်ကျောနာတာရှည် PMO သွားမရှိရည်ရွယ်ချက်ကိုရှိသည်။ ငါ relapse ပြုလျှင်ငါယခုသွားရာလမ်းထွက်ကိုငါသိ၏။
01 မှာ 06 / 2013 / 7: 30 ညနေ
ငါလှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ခံစားကြရသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပျော့အောင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့ကမ္ဘာကိုလက်ညှိုးပေးခြင်းယောက်ျား, doughy, အပျော်အပါး-စွဲမှောင်မိုက်အရိပ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ကျေနပ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ပျော်ရွှင် grounded, ခိုင်မာတဲ့, စည်းကမ်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်ကလေးဖော်မြူလာအပေါ်မှီခိုမရဖြစ်လာရသည်။
စားသုံးသူလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်စွမ်းရည်ရှိသော၊ လွတ်လပ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောစည်းကမ်းရှိသောအမျိုးသားများနှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိရှိပါ။ ငါတို့ကြောက်တယ် =
01 မှာ 12 / 2013 / 5: 16 ညနေ
ဒီ subreddit ထွက်ခွာ။ ဒီမှာကျွန်တော်စုဆောင်းထားတဲ့အကောင်းဆုံးစာသားပဲ။
ငါပြန်သွားသည်နှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဤ subreddit ထွက်ခွာဖြစ်၏။ ဒီမှာငါစုဆောင်းထားတဲ့အကောင်းဆုံးစာသားပဲ။
နောက်ထပ် ၁၅ ရက်ထပ်ပြီးအားဖြည့်ပြီးနောက်မနေ့ကငါဖောက်ခွဲခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ငါသည်ကြိုတင်မြင်နိုင်သောအနာဂတ်အတွက်လုံး ၀ reddit, youtube စသည်ဖြင့်စွန့်ခွာရန် ယနေ့မှစ၍ စတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကဒီ subreddit နှင့်အခြားနေရာများမှကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအကြံဥာဏ်များ။
သင်သည်ထိုအဖြစ်လွယ်ကူသောတစ် fuck ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလူများ, လိုအပ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအသီးအသီးနေ့အဘို့နှင့်ရေရှည်အတူတစ်ဦးကတင်းကျပ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပိုမိုသုတေသနပြုအစားအသောက်များတွင်ပိုမိုစနစ်တကျအချိန်။
Dude, သင်တို့ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် PMO ပါသောအနက်ရောင်အပေါက်၏မြေထုဆွဲအားဆွဲအားမှစတင်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့သည့် fapstronaut သူချင်းအကြောင်းဖတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်အမြဲပျော်ရွှင်မိသည်။ အဲဒါကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြပြီးပြီ။
သငျသညျ, ယခုအာကာသထဲအတွက်ပါပဲ။ ဤသည်သည်သင်တို့အတွက်အံ့သြဖွယ်ခရီးတစ်ခု၏အစဖြစ်သည်။ ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူးသာယာပါစေ။ PMO ပျက်ခြင်းသို့ထပ်မံမ ၀ င်ရအောင်သတိထားပါ။ ဒါဟာတကယ့်အရာ၊
ငါမှားယွင်းသောကြောင့် porn နှင့်ဆက်စပ်သောက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ရန်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံမဟုတ်ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အဓိကအကြောင်းရင်းသည်မှားသည်။ ညစ်ညမ်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူအများစုသည်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်သည်။ သူတို့ကိုလိင်ကရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တာပဲ။ သူမကသူမခံစားသည်ဟုထင်သရွေ့သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ခံစားချက်ကိုသူတို့ဂရုမစိုက်ပါ။
ငါ့ကိုယ်နှင့်ငါ၏စိတ်ကိုနှငျ့ဆကျသှယျတာပါ။ Self-ဆန္ဒပြည့်၏ဤရိုးရှင်းသောအခွန်ရှောင်နေတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ says:
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်နှင့်တူသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်မည်မျှကြီးထွားလာမည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်ခြုံပုန်းထဲပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနေစဉ်အတွင်းယောက်ျားတစ်ယောက်သည်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုခုန်ချခြင်းနှင့်ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဖန်သူများကမူဤအပြုအမူနှင့်ဘာမျှမတွေ့ရပါ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင်ချောင်ချောင်နေသောသူဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်အလောင်းထားပြီဟုစဉ်းစားရန်လှည့်စားနေသည်၊ အဲဒါကိုထိုက်တန်မှဘာမျှမ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ စိတ်မချရခြင်း၊ စိတ်မဝင်စားသော beta / Masturbating ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုချခြင်းသည်လက်စွပ်ထဲသို့မ ၀ င်ခင်သုတ်ပုဝါကိုပစ်ချခြင်းနှင့်တူသည်။
မြေအောက်နက်တဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာနေတယ်ဆိုပါစို့။ သင်သည်မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိနေသောကြောင့်လှေကားထိပ်သို့ရောက်ရန် (ဓာတ်လှေကားမရှိ) တစ်နာရီကြာသည်။
သင့်အိမ်ရုံရှင်းလင်းသောလိုအပ်ချက်များကိုအပေါင်းဟောင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူပရိဘောဂဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအလင်းမျက်နှာကျက်ကနေ dangling တစ် 50-ဝပ်မီးသီးကနေလာပါတယ်။ သငျသညျမှာသဘာဝအလင်းတပ်မက်ပေမယ့်, သငျသညျလည်းလှေကားတက်နှင့်အမည်မသိသို့သင်တို့၏သက်သာဇုန်ထဲကစွန့များ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမုန်း။
တစ်နေ့ကျရင်တီဗီပေါ်မှာနေကိုမြင်ရတာ။ တကယ်တော့နေကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှကြည့်ရှုရန်ရည်ညွှန်းထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကထိုခရီးစဉ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရုဏ် ဦး၊ မွန်းလွဲပိုင်း၊ မွန်းတည့်အချိန်၊ မိုus်းမလင်းမှီရှိသည်။ နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့တဲ့အခါမင်းအရမ်းပျော်တယ်။ မကြာခင်မှာပဲမင်းဟာအိပ်ရာထဲသက်တောင့်သက်သာနေဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့နာရီများစွာစိုက်ထုတ်နေပြီ။
သင်ကမြေအောက်ခန်းကိုစွန့်ခွာစပြုသည်။ လှေကားတွေကအရမ်းပင်ပန်းနေပြီ၊ သင်ထွက်ဖို့စီမံတဲ့အခါမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးလေ့ရှိတယ်။ ဤအတောအတွင်းရုပ်မြင်သံကြားသည်အရုဏ်တက်ချိန်၌ Yosemite ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောရိုက်ချက်များကိုပြသသည်။ ဒါဟာအဖြစ်မှန်ထက်ပိုကောင်းပုံရသည်။
ခဏတာမှာမင်းဟာအပြင်ဘက်ကိုပိုပြီးထွက်သွားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိပေမယ့်ခဏကြာတော့ပျောက်သွားတယ်။ နှစ်များ၊ နှစ်များကုန်လွန်သွားသည်။ သငျသညျအထူးသဖြင့်တက်ကြွနေလျှင်, သင်အခါအားလျော်စွာနေဆဲဖြစ်နိုင်သည်, သို့သော်သင်ပြုလျှင်နေကသင်မှတ်မိသည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားပြီးပျင်းစရာကောင်းသည်ဘာကြောင့်ထင်ရသနည်း မင်းအိမ်မှာနေချင်တယ်။ အဲဒီမှာမှောင်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအဲဒီရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ကနေကလှတယ်။ ငါ့အတွက်တော့ NoFap နဲ့ PornFree ကြားကဘဝပဲ။ သူတို့ဟာအဲဒီရုပ်မြင်သံကြားစက်ကိုချိတ်ဆွဲနေတယ်။ ပြီးတော့ပြန်လည်အာရုံစိုက်ဖို့ခြေလှမ်းသေးသေးလေးတွေလုပ်နေတယ်။ “ အပြင်ကိုထွက်တာ” ကနောက်မှပိုပြီးလွယ်ကူလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မြေပြင်ပေါ်တွင်နေထိုင်သောအခါကျွန်ုပ်၏အမြင်ပြောင်းလဲသွားသည်။
အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုကူညီပေးသည်စွဲနေတဲ့ရောဂါမဟုတျကွောငျးစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိတစ်ဦးကရောဂါ, ဒါပေမယ့်သင်ပြုတဲ့ရွေးချယ်မှု။ သငျသညျခိုငျမာဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ porn ပျော်မွေ့နေတဲ့အမြန်ထိခိုက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါခံစားချက်စက္ကန့်ကြာပေမယ့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုနာရီ။ အတော်လေးအစဉ်အဆက်ကိုသင်ပေးနိုင် porn ထက်အများကြီးပိုပြီးပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်တကွသင်ပေးလိမ့်မည်။ သငျသညျဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျထိန်းချုပ်မှု၌ရှိကြ၏။
မျှော်လင့်ချက်မပျောက်ပါစေနှင့်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဒီနေ့နှင့်ဤခေတ်တွင်ကျော်လွှားရန်အခက်ခဲဆုံး (နှင့်အရှိဆုံးနေရာအနှံ့တွင်) စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုကင်း၊ မက် (သို့မဟုတ်) အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းတမ်းခက်ထန်မှုမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အပေါ်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာကိုအရိပ်မျှသာဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အခြားသူများကိုကူညီ။ ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုပျက်စီးစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဘာမျှမကုန်ကျဘဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဝယ်ယူနိုင်သည်။ သင်ဖြတ်သန်းသွားသောအရာများသည်အလွန်အမင်းနာကျင်ဖွယ်ဖြစ်ပြီးသင့်ဘ ၀ ၏အခက်ခဲဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တို့မူကားနိုင်။ နာကျင်မှု၊ အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိသည်ကိုသင်ရိုက်နှက်နိုင်သည်၊ သင်ဖြစ်ချင်သောသူဖြစ်လာနိုင်သည်။
Hard-drive တစ်ခုမှာကျိုးနွံပေမယ့်နှစ်ရှည်လများသိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့မော်ကွန်းတိုက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါဟာဟန်ဆောင်သူဖြစ်လို့ငါ့ကိုကောင်မလေးအကြောင်းအများကြီးသတိပေးတဲ့ဒီမိန်းကလေးကလွဲလို့အရာအားလုံးကိုငါဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ငါ pics နှင့်ဗီဒီယိုအချို့ကိုကြည့်သည် (အမှားကြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်)၊ ထို့နောက်ထိုမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုငါသာချိတ်ဆွဲမည်ဟုစဉ်းစားပြီး folder ကိုငေးကြည့်လိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီနောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ“ created” နေ့ကိုသတိပြုမိတယ်။ ခုနစ်နှစ်ငါဒီအံဖွယ်ကိုသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပြီ။ ဤမိန်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်တည်ရှိသည်ကိုပင်မသိရှိပါ။ သူမသတိပေးခဲ့သည့်အရာမှာယခုအိမ်ထောင်သည်၊ မိခင်တစ် ဦး နှင့် (လုံးဝရိုးရိုးသားသားပြောရရင်) အဆီဖြစ်သည်။ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အတိတ်ကာလ၊ စိတ်ကူးယဉ်နယ်မြေတွင်နေထိုင်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုပါ။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အကွန်ပျူတာသူတို့အားနောက်ဆုံးရှိနေဆဲဟု-bits အပါအဝင်တရားဝင်သန့်ရှင်းသောသူအစီရင်ခံရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်! ငါ့ထံသို့နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာ!
တကယ်လား မင်းဟာမင်းထောင်ချီတဲ့နာရီပေါင်းထောင်ချီတဲ့အခြားယောက်ျားလေးတွေကိုမင်းရိုက်ချင်တဲ့ပုံတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုမင်းဂုဏ်ယူပါတယ်၊ အမှောင်ထဲမှာထိုင်နေရင်း၊ မင်းဘယ်တော့မှမတွေ့နိုင်မယ့်သူတွေ၊ မင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတာမင်းတောင်မသိဘူး၊ သူမ၏ငွေတောင်းခံမှုကိုပေးသော 'ပရိသတ်' ကိုဆွဲဆောင်ထားသည့်အချို့သောအရာများ။ အဲဒါမင်းကိုဂုဏ်ယူတာလား
နွေရာသီမှာ nofap ကိုစလုပ်တုန်းကဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမာခံစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်လို့မယူမှတ်ခဲ့ဘူး (တစ်နေ့တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်နေ့တာကိုကျော်ဖြတ်တာဟာကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး) ဒါပေမယ့်အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတချို့ကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကငါဖြစ်ချင်တဲ့သူပဲ! " ထိုလှုံ့ဆျောမှု 44 ရက်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်အကြိမ်အနည်းငယ်ပြန်ပေါ်လာပြီးဒီနောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်ရက် ၃၀ ထက်ပိုပြီးမရရှိတော့ပါဘူး။ ငါဘာကြောင့်ဒီအချိန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘာကြောင့်ဒီအချိန်မှာ ၀ င်လုပ်နိုင်စွမ်းနှေးကွေးနေတာလဲသို့မဟုတ်အလေ့အထများပြောင်းလဲမှုဖြစ်ရုံသာမကဘဲဂါထာအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
| ငါဘယ်တော့မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒါကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေမယ်ဆိုတာငါမြင်ရလိမ့်မယ်။
သင်ရှာဖွေနေသည့်ပြောင်းလဲမှုသည် ED ကယ်ဆယ်ရေး၊ စွဲလမ်းမှုကင်းမဲ့သော၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားပိုမိုရရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အောင်မြင်မှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတင်ပြသောအကျိုးကျေးဇူးများစသည်တို့ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုဂါထာမပြည့်စုံပါ။ စိန်ခေါ်မှုကိုပထမနေရာတွင်ယူခြင်းဖြင့်သင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးဟုယူဆသည်။ ဒီနေရာမှာငါတို့အားလုံးသတိရသင့်တဲ့အရာ - ငါတို့ပြောင်းလဲပြီ။ သင်သည်နေ့ ၃ ရက်သို့မဟုတ် ၁၉၃ ရက်တွင်နေပါစေသင်တံဆိပ်မထိုးခင်ကထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးသတိထားမိတယ်၊ မင်းဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်စိန်ခေါ်ပြီးကြီးထွားနေတယ်။ ဤအရာအလုံးစုံတို့၏အလင်း၌, ဒီတစ်ခါငါဂါထာညှိပါတယ်။ အခုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကအများကြီးပဲ။
ငါတိုက်တွန်းခံရသည်ဟုခံစားရသည့်အခါတိုင်း၊ ဒီစကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတိုက်တွန်းမှုဘယ်လောက်မြန်သွားတယ်ဆိုတာတုန်လှုပ်သွားစေတယ်။ အဲဒီစကားစုကစိတ်ပြန်ဝင်လာဖို့တောင်မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ငါကတော့အဲဒီလိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူမဟုတ်သူလို့သင်ထင်ရင်၊ ဒါဟာအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ပုံရပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဝိသေသလက္ခဏာ၏ရှုထောင့်အပေါ်အပြည့်အဝပါဝါရှိသည်။ အရင်တုန်းကသင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ပစ္စုပ္ပန် - သင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး, သူပဲကောင်လေးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။
၎င်းသည်အတွေးအခေါ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုကိုလုံးလုံးလျားလျားပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ PMO ကိုအချိန်အတော်ကြာရှောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ထိုအရာများကိုမလိုအပ်သောသူသို့မဟုတ်စဉ်းစားရန်မလိုသူကဲ့သို့ဖြစ်လာရန်အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ငါဖြစ်ချင်တဲ့သူကပိုပြီးတော်တယ်၊ တီထွင်တယ်၊ ပိုတတ်တယ်။ ငါဘဝအကြောင်းကိုသူကပြောတယ်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ စာအုပ်ကောင်းများဖတ်ရှုခြင်း၊ တေးဂီတကစားခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကိုမျက်လုံးချင်းကြည့်ရှုသောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ငါ pixelated အပျော်အပါးနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံရန်အချိန်မရှိကြပါဘူး။ ငါရေအေးတစ်ခွက်ယူပြီးငါ့အရေပြားပေါ်ရှိချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုလုံးကိုချိုမြိန်စွာခံစားချင်သည်။
အကြောက်အရွံ့ဆုံး၊ အတိုဆုံး၊ ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမျိုးသမီးများသည်ငါတို့ကဲ့သို့အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအပျိုလေးများ၊ သူတို့ကအစွမ်းသတ္တိ၊ ပုလ်အရည်အသွေးတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးပြည့်မီသောအရည်အသွေးများကိုစွဲမက်ခဲ့လျှင်၎င်းတို့သည်လိင်တူချစ်သူများဖြစ်လိမ့်မည်။ အပြုသဘောသည်အပျက်သဘောနှင့်တွေ့ရမည်။ လိင်တူချင်းစုံတွဲများတွင်ပင်ဘောင်းဘီ ၀ တ်သူကို ၀ တ်သည်။ အားလုံးခြုံပြောရရင် "ခံစားလွယ်တဲ့ယောက်ျားများနဲ့ငိုကြွေးသောအမျိုးသားများလိုအမျိုးသမီးတွေ" နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးမျိုချခဲ့တဲ့ ဦး နှောက်ကိုဖျက်ပစ်ခြင်းအကြောင်းပဲ။ ဘဝရဲ့အရာအားလုံးမှာမျှတမှုရှိတယ်။ ရောင်စဉ်တစ်ခုတွင်ယောက်ျားလေးများသည်လုံးဝအထင်ကြီးလေးစားခံရပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူအမျိုးသမီးများအားနှုတ်ဖြင့်ကာယရေးအရနှိပ်စက်ကာကလေးငယ်တစ် ဦး ကဲ့သို့စိတ်ညစ်ညူးမှုများရှိသည့်ဝမ်းနည်းဖွယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားမှုကင်းမဲ့သောအသားခေါင်းများရှိသည်။ စစ်မှန်တဲ့ခွန်အား၊ မင်းတို့မင်းကိုတိုက်ခိုက်ချင်ပြီးထွက်သွားတဲ့အခါဒီယောက်ျားတွေကိုခေါင်းခါလိုက်ရုံပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသက်သေပြချင်နေလို့ပဲ။ သို့သော်စစ်မှန်သောခွန်အားသည် smirks နှင့်ဝေးသွားသည်။ whippy one-liner ဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။ အဲ့ဒီလှပတဲ့ဟန်ချက်ပဲ။ နှိမ့်ချမာနထောင်လွှား။ ရယ်စရာရယ်စရာ (သင်သိ) ။ တစ်ခုခုကိုအစွန်းရောက်ဆိုးသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအလယ်လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ ဆိုလိုတာကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီဝေါဟာရကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဟန်ချက်ကိုရှာပြီးအစွန်းရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေဖို့ဆိုလိုတာပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ဖို့သင်သွေးဆောင်ခံရမှာမဟုတ်သည့်အချိန်ရောက်လာနိုင်သည်။ ဒါဟာ "Eh၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ " အဲဒီအစားမင်းကမင်းစဉ်းစားနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနမ်းတာဘဲ၊ သူနဲ့အချိန်ဖြုန်းတာ၊ စကားပြောတာတွေ၊ ပြီးတော့သူမရဲ့အတွင်းပိုင်း၊ သူမအတွက်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုသိပြီးချစ်မြတ်နိုးလာတာကပိုတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်။ တထောင်လှပသောအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများထက်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအချို့အစားအိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတစ်ညလုံးသူနှင့်အပြည့်အ ၀ ၀ တ်ဆင်ထားပြီး၊
မိန်းကလေးအချို့နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ ယောက်ျားတွေလိုသာပုံမှန်ဆက်ဆံပါ။ သူတို့ကိုမျက်စိထဲမှာကြည့်ပါ။ အခုတဖန်ဟန်ချက်ညီ။ သူတို့၏အသက်တာကိုသေစေတတ်သောပြောင်တင်းတင်းကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သူတို့၏စိတ်ကိုထိုးဖောက်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်၊ အပြုံး နောက်တစ်ခါအရူးတစ်ယောက်လိုကျပန်းမသင့်တော်သည့်အချိန်များတွင်မပြုံးပါနှင့်၊ သို့သော်သင့်တော်သောအချိန်တွင်ပါးစပ်ပိတ်။ ပါးစပ်ပိတ်လိုက်သောအခါအဆင်ပြေလိမ့်မည်။ သူတို့မြည်းကိုမနမ်းပါနှင့်။ သာမန်ဖြစ်ပါစေ သူတို့အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိရင်သူတို့သိအောင်ပြောပြပါ။ အခုတော့သူတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပါ, အရမ်းရယ်ရတယ်, ဒါပေမယ့်သာမန်လူတစ် ဦး ဖြစ်။ တစ်ခါတစ်ရံပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းသည်လုပ်ရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ခဲ။ ပုလ်နှင့်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ လူတိုင်းက“ ငါတို့ဘယ်မှာစားရမလဲ။ ” လိုလျှင် “ ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ဘယ်မှာစားချင်တာလဲ” မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲငါမသိဘူးလား "ပါးစပ်ပိတ်ထား။ ပါးစပ်ပိတ်ထား။ ဒီနေရာမှာလူတိုင်းကိုသတ်ဖြတ်လိမ့်မယ်။ WE MEXICAN TOWN တွင် MAMA ၏ TACO ကားရပ်နားရာနေရာတွင်အမှိုက်များရပ်နေသည်။ အားလုံးကိုငါမုန်းတီးတယ်။
စိတ်မရှည်ခြင်းနှင့်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနိုးပါ။ အစွမ်းထက်မောင်းနှင်, စိတ်မရှည်။ သင်၏ဘဝကိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်နေထိုင်ပါ။ သင်သည်လဲသော်လည်းနောက်တဖန်မလဲရ။ Mark Cuban (ဟုတ်တယ်၊ FANBOY ပါ။ ) မရေမတွက်နိုင်သောကာလများမအောင်မြင်ပါ။ ငါသူတစ်ချိန်ကမှာစွမ်းအင်သုံးနို့ကိုရောင်းဆိုလို။ သူသည်ညစ်ပတ်နေသောတိုက်ခန်း၏ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်အိပ်နေသည်။ ယခုသူသည်ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမအောင်မြင်မှုများမှသင်ယူခဲ့ပြီးအကျိုးရရှိခဲ့သည်။ ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမီးကိုမီးရှို့ထားပါ။ ဘယ်တော့မှအလဟ, မီးမရှို့ဘဲအရှုံးမပေးဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည့်ဘဝကိုဘယ်တော့မျှခွင့်မပြုပါနှင့်။ သင့်အတွင်း၌ရှိသောမီး၊ မောင်းနှင်မှုတစ်ခု၊ အလိုဆန္ဒနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ဖြင့်နေထိုင်ပြီးရှူရှိုက်ပါ။ ရွှေ့ပါ။ ဒါမင်းရဲ့နိုးထမှုပါ ဒါကမင်းရဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးပါပဲ။ ဘီယာအနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်အစ်ကိုအားလုံးတို့ကငါတို့ကိုပြန်သွားနိုင်မယ်၊ သူတို့အတူတကွအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြ၊ သူတို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ငါတို့အားစိတ်မကောင်းစွာပြောခဲ့သည့်ဒုတိယအခွင့်အရေး ဒုတိယအခွင့်အရေးရနိုင်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းမှာသူတို့တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒုတိယအခွင့်အလမ်းပဲ။ ယခုသင်ထိုလက်ဆောင်ကိုအခမဲ့ရရှိသည်။ မဖြုန်းပါနဲ့ သင်သည်ဤအဖိုးထိုက်သောအသက်ဆုလက်ဆောင်ကိုသင်ဖြုန်းတီးသလား။ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အဓိပ္ပာယ်နှင့်အသက်ရှင်ပါစေ။ ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီပါ။ အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးအသက်ရှူပါ၊ ကံကောင်းပါစေ။
သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌တစ်ခုခုကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အလေးအနက်ထားယောက်ျားတွေ, ထို့နောက် fapping ဖြတ်။
ကျွန်ုပ်ပြောရမည့်အချက်များကိုဖတ်ပါ။ Fapping သည်သင်၏စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဘ ၀ ၏ပျင်းစရာကောင်းသည့်မိနစ်တိုင်းသင်၏ dopamine ဆာလောင်နေသော ဦး နှောက်သည်အင်တာနက် porn ဟုခေါ်သောဒီဂျစ်တယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအချည်းနှီးဖြစ်မှုကိုတောင့်တသည်။ သင်၏ဗီဇမျိုးပွားရန်အချိန်အများစုသည်သင်၏ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးသင်၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသင်ဆန့်ကျင်။ ဆုံးရှုံးသောအခါ၌ဖြစ်သည်။ porn စွဲ။ ဒီမောင်းနှင်မှုကသင့်ကိုနံရံတစ်ခုဆီကိုတွန်းပို့လိုက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်နက်ရှိုင်းတဲ့တွင်းထဲကိုဆွဲဆောင်တယ်။ ထိုနာရီပေါင်းထောင်နှင့်ချီသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများနှင့် Cleenex ထဲ၌သင်ဘာတွေရခဲ့ပြီနည်း။ ဘာမှမ သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်သင်၌အလားအလာများစွာရှိသော်လည်းသင်၏ဘောင်းဘီထဲ၌ငြီးငွေ့ခြင်းဖြင့်ဖြုန်းတီးနေသည်။ Fapping သည်သင့်အားမလုံခြုံမှုကိုခံစားရစေသည်၊ သင့်အားအဆုံးမဲ့စွမ်းအားပေးနိုင်သည့်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်မက်မှုကိုခိုးယူသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်မြူဆိုင်းနေသော၊ သင်၏စိတ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကျွန်ဖြစ်လာသည်။ နာရီပေါင်းများစွာအင်တာနက်ဖြုန်းတီးပြီးနောက်သင်အား ၁၀ စက္ကန့် ၀ မ်းမြောက်စွာခံစားနိုင်သည်။ သင်ရည်းစားအဖြစ်အမြဲရလိုသောမိန်းကလေးနှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတိုဆုံးအချိန်များကားအဘယ်နည်း။ ဘာမှမ သင့် ဦး နှောက်ကစိတ်ကျေနပ်မှုရစေပြီးပိုမိုလိုချင်သည်။ ထိုထက်ပို။ တဖန်သင်တို့ဘာမှနားမလည်ကြဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤတိုတောင်းသောပျော်မွေ့မှု၊ ခေတ်သစ်ကပ်ဘေးများ၊ သင်တွေ့ဖူးသော fap-session များအားလုံးကိုကျော်တက်စေသည် ဘာမှမ ထိုဆန္ဒများကိုကျော်လွှား။ ဆုံးမပဲ့ပြင်ပါ၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်သည်။ မင်းသာမင်းကိုနိုင်မှာပါ fapping မရှိတော့ပါ။ နောက်တဖန် porn မ။ ခက်ခက်ခဲခဲသွားပါသို့မဟုတ်အိမ်ပြန်ပါ။
01 မှာ 15 / 2013 / 4: 49 နံနက်
ငါ porn မှာရှာဖွေနေစတင်သောအခါငါတော်တော်လေးငယ်ရွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံး peek တယ်ဘယ်မှာအကြှနျုပျ၏အစ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်၏။ ဒါဟာငါ့နှမလက်ထပ်နှင့်သူမ၏ယခုခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ပြောင်းရွေ့ထိုနှစ်တွင်ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏အစ်ကိုတစ်ဦးကျိုးခြေထောက်ခဲ့ရပြီး၎င်းတို့၏မြေအောက်ခန်းမှာ set up ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါသည်သူ၏, Xbox ကစားရန်ဆင်းသွားသောအခါ, သူ့ကိုကွာကသူ့မဂ္ဂဇင်းထားရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်တခုရှိ၏။ ငါအချိန်တွင် 14 ဖြစ်ခဲ့သည်။
လိင်ကညျ့စုံညစ်ညမ်း၏6နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ အမျိုးသမီးတွေလူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုအားဖြင့်အရှက်, ယောက်ျားမိန်းမများက emasculated ခြင်းကိုမြင်ပြီးနောက်ကစွဲရပ်အချိန်ပါပဲ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကနေရာတိုင်းပါပဲ။ ကြော်ငြာအမျိုးသမီးအလောင်းကောင်၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောပုံရိပ်တွေဆံ့; YouTube ကိုရှေ့ပေါ်မှာအတွင်းခံမော်ဒယ်များ၏ရုပ်ပုံလွှာတို့ကသီချင်းကိုသို့စို့နားထောင်ပြည့်ဝ၏။
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်အဘယ်သူ၏ရိုးကိုယခုအချိန်အထိတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသင်အဆောက်အဦးတစ်ခုအဆုံးကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်များမှာတစ်ဦး 24 /7porn ဆိုင်သို့အိတ်ဖွင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းတံခါးဝ၌ထွက်စေပါတယ်။ သင်စတိုးဆိုင်ထားခဲ့ပါတောင်မှပြီးနောက်, အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။
သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားရှာဖွေတွေ့ရှိအပြင်ဘက်တွင်။ အဘယ်သူမျှမလွယ်ကူသောထွက်ပေါက်ရှိကွောငျး။ တံခါးကိုအထဲကမှသာသင့်ရဲ့သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးမြင်ကွင်းများကနေမိန်းကလေးတွေသတိရထံအပ်နှံခဲ့ကြကြောင်းဦးနှောက်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်၏ခံစားချက်၏အသေးငယ်သောအဘို့ကိုဦးတည်ပါတယ်။ အချိန်သာကျမ်းပိုဒ်သည်ဤအမှတ်တရများကိုပျောက်ကင်းစေပါလိမ့်မယ်။ သာခကျြအောတစ်အတိတ်အသက်တာ၏အကြွင်းအကျန်ရှိနေဆဲသည်အထိတစ်ဦးချင်းစီတစေ့တစောင်းနှင့်အတူသူတို့ညှိုးနွမ်းပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် ... ဤသူကားငါဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်ဘာလဲ
01 မှာ 15 / 2013 / 4: 30 ညနေ
ငါဘယ်တော့မှ (သို့မဟုတ်လုံးဝနီးပါး) အောင်မြင်သောလိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဖူးသူများသည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်သည်။ Rebooting ဆိုတာက hard drive ကို virus ပြန်သုတ်ဖို့လိုပေမယ့် operating system အသစ်မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ပုံရိပ်ယောင်ကိုတုံ့ပြန်ပုံကိုမသာ, ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်စပ်လျဉ်း၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စိတ်ခံစားမှုဘက်။ ဒီအဆင့်ရောက်ရင်သုညထက်နိမ့်တယ်၊
01 မှာ 16 / 2013 / 7: 18 ညနေ
ဒီနတ်ဆိုးချရင်ဆိုင်ရနှင့်၎င်း၏မြည်းကိုကန်! ဒါဟာသင့်ထံမှအလုံအလောက်နှစ်ပေါင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သင်၏အသက်တာကိုပြန်ယူချိန်။
01 မှာ 18 / 2013 / 12: 20 နံနက်
သတိပေးချက်: ဒီ post တော်တော် rant-ey ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီမှာငါ့ကိုထွက်။ ကျွန်ုပ်၏မကျေနပ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါထင်တာကပေါင်းစပ်မှုလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိင်မှုကိစ္စ၊ ချိန်းတွေ့မှုနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဖို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ယဉ်ကျေးမှုကပြောင်းလဲသွားပြီ။ သင်သတိမထားမိပါကလိင်အများစုသည်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေအပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါပဲ ဆိုလိုသည်မှာမိန်းကလေးများသည်ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံလိုသောယောက်ျားများအမြဲရှိသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဖိနှိပ်ဖို့ကပိုခက်တယ်၊ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်မင်းကတခြား wanna-be alphas တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အားစိုက်ထုတ်ရမယ်။ သငျသညျသူ့အဘို့အများကြီးသွားနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်တောင်မှလျှင်, လိမ်လည်လှည့်ခံရဖို့လွယ်ကူပါတယ်, သင်မိန်းကလေးများရုံကျူးလွန်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်ယောက်ျားတွေဟာလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏စိတ်ကျေနပ်မှုရစေရန်၎င်းတို့သည်ရှုပ်ထွေးသောပြိုင်ဆိုင်မှုစက်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်လိုသည်။ သူတို့က fuck ဆိုတဲ့လိုပဲ၊ မင်းအခုမဟုတ်ရင်မင်းကမင်းကိုတကယ်တမ်းအရှုံးမပေးပါဘူး။ (ဘာလို့တစ်မိနစ်အတွင်းမှာဘာဖြစ်လို့ရှာရတာလဲလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ )
ငါကအရမ်းကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ၊ ထိပ်တန်းအဆင့်တောင်မှပဲ။ အသိဉာဏ်ရှိပြီးလှပသောလူတစ်ယောက်သည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခု၊ လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ရည်းစားများနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများရှိသည့်အရည်အသွေးပြည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရရှိနိုင်မည့်အချိန်ကိုတောင့်တသည်။ အဆိုပါချိန်းတွေ့ဂိမ်းနှင့်ဖြစ်ခြင်း အမှန်တကယ် လူမှုရေးပြီးဆုံးပြီ ဒါတွေအားလုံးကအမြီးနဲ့လူမှုရေးဆန့်ကျင်ရေးအမှားတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်။ ငါတို့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချလိုက်ခြင်းနှင့်တူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အီတလီကဲ့သို့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းနိုင်ငံများရှိယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကိုပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ဒါဟာကာမဂုဏ်နှင့်ရင်းနှီးသောပါပဲ။ သင်အမှန်တကယ်စကားပြောဆိုနိုင်သည် သို့ သင်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံချင်သောမိန်းကလေးတစ်ဦး, သူကချစ်သောသူ! အမှန်တရားဖြစ်သော်လည်းသူတို့တော့ဘူးပိုပြီးအမေရိကန်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်များစွာသောလူတွေဟာဒီစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ Reddit တွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် duschy-wanna-be-alphas ရှိသည်။ သို့သော် reddit သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်သည် (Gone Wild မှအပအခြားမိန်းကလေးများသည်သာမန်အားဖြင့်ပျမ်းမျှ redditor ကိုမသုံးကြပါ) ။
မိန်းကလေးတွေတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေဖြစ်ကြောင်းဒီတစ်ခါလည်းတကယ်တော့ သေရော ပထမ ဦး ဆုံးအရာအတွက်ပြtheနာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမေးလျှင်, အစဉ်အဆက်လျှင်, အိတ်၌ပြန်ထားရန်မလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်လျှင်, ဒီသားရဲပေါက်ဖွားသောအရာကိုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ဒီကောမိန်းကလေးတွေကသူတို့ရဲ့လိင်မှုကိစ္စကြောင့်လေးစားမှုရှိတာကိုသင်မြင်ပါသလဲ။ အမျိုးသားများသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိစိတ်ဖြင့်လေးစားကြသည်။ ငါတို့ရတယ် ယုံကြည်စိတ်ချမှု လိင်မှတဆင့်သော်လည်းမချစ်ခင်လေးမြတ်။ မယားဖွစျကွောငျးကိုအစဉ်အဆက်သတိထားမိ အမြဲ လူတ-ပိတ်ဆို့အရေးယူအဖွဲ့အစည်း? သူတို့အလုံအလောက်တိုင်း slut fucking မသွားစေရန်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားသောကွောငျ့လူတို့သညျမယားပြဌာန်းခြင်းနှင့်ပစ်စစ်မှန်တဲ့အထီးယောက်ျားအဖြစ်, အရှင်တန်ဖိုးရှိသူတို့ရဲ့အာဏာနှင့်အဓိပ္ပာယ်ထွက်တန်ဖိုးထားနှင့်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးကြီးစိုး monogamous လူ့အဖွဲ့အစည်းပြန်သွားဖို့လိုသလဲ အဘယ်သူမျှမ fuck ဆိုတဲ့။ သို့သော် IMO ကမ္ဘာကြီးကိုလျှင်ပယ်ဝေးပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် လူတိုင်း porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း, fuck ဆိုတဲ့ထက်ပိုတစ်ခုခုဂရုစိုက်။ ယောက်ျားတွေဒီဦးဆောင်လမ်းပြရန်လိုအပ်သူများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီတော့လုပ်နေခြင်းဖြင့်ရရှိဖို့တစ်ခုခုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မြား။
TL; DR : မိန်းကလေးအများစုဟာအဓိကအားဖြင့်တော့ fuck ဆိုတဲ့အရသာခံချင်နေတာပဲ။ လိင်သည်ပျော်စရာကောင်းသော်လည်း (ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း) ယောက်ျားများသည်လိင်ကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြသည်။ တန်ဖိုးများကိုမွေးမြူခြင်းမှရရှိသောအရာတစ်ခုခုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမှုရေးခံစားချက်၊ ကရာတရာအမျိုးသမီးတန်ဖိုး၊ အမျိုးသားများသည်ထိုအဖွဲ့အစည်းကိုကာကွယ်သူများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိပါသလော။ ကျနော်တို့တင်းကြပ်သော monogamy ကိုပြန်သွင်းရန်မလိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းနှင့်နီးကပ်သောအရာတစ်စုံတစ်ရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ယောက်ျားများအတွက်အကျိုးရှိသည်။
PS ငါဟာအမျိုးသမီးတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာလုံးလုံးလျားလျားထင်ပါတယ်။ လူသားတို့တွင်ပmultipleိပက္ခဖြစ်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ ငါဒါကိုကြည့်လိုက်တယ် - porn ကဒီ drives တွေကိုချိန်ခွင်လျှာထဲကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် ယောက်ျားတွေတရားရုံးတွင် ဘောလုံးကိုကျဆင်းသွားသည်အဘယ်မှာရှိ။
01 မှာ 23 / 2013 / 12: 16 နံနက်
တခါတရံငါပင်လျှင်သိခြင်းမရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညူးစေသည့်တွင်းနက်ထဲ၌တအံ့တသြဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အဲဒါဟာစွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ စွဲလမ်းမှုကိုတောင်သတိမပြုမိခဲ့ဘူး။ ငါ့ကိုယ်ခန်ဓာကိုယ်ဟာအခြေခံအားဖြင့် "မရှိ" လို့ပြောပွီးငါ့ကိုပိတ်ပစ်တဲ့အထိအဲဒီအရာတွေရဲ့နှစ်နဲ့နှစ်တွေများခဲ့တယ်။ ပြန်လာ၏ဤဖြစ်စဉ်ကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
01 မှာ 23 / 2013 / 7: 10 ညနေ
လူ့အဖွဲ့အစည်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုလူတစ်ယောက်တကယ်သိတယ်ဆိုတာမသိဘူး !! သူတို့နှင့်အမှန်တကယ်ပေါင်းသင်းခြင်းသည် ED ဖြစ်သည်။ Porn လူတစ်ယောက်ကိုကြောက်တဲ့ကောင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ သင်၏လူမှုရေးအဆင်မပြေမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ အာရုံမစိုက်နိုင်၊ မလုံခြုံမှု၊ ယောက်ျားများသည်ဆရာ ၀ န်များထံသို့သွားကြသည်။ အားလုံးသည်ဆေးညွှန်းကိုရယူခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သင်၏ ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ kind ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ပတ်ကြည့်ပြီးနှစ် ၂၀ အတွင်းခံစားခဲ့ရသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
01 မှာ 24 / 2013 / 3: 17 နံနက်
သူတို့ porn ဖြတ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့် 100 ယောက်ျားတွေဆိုသညျကားထက် ပို.
01 မှာ 30 / 2013 / 3: 45 ညနေ
(နေ့ 27) ခေတ် 19
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ယုံကြည်မှုပေးပါဘူးနှင့်လူများကကြည့်ပါ။ ပုံမှန်ယခုအချိန်အထိငါ၏အတစ်ခုလုံးကိုဘဝကိုချွတ်ခဲ့သော်လည်းအဖြစ်ယခုအချိန်တွင်ငါခံစားရတယ်။
အထူးသဖြင့်မနက်ခင်းမှာနိုးလာတဲ့အခါကလေးတစ်ယောက်လိုငါခံစားခဲ့ရတယ်။ အကြောင်းအရာစိတ်ဓာတ်ပါ။ ဒီနေ့ငါဘာကြောင့် PMO လုပ်ရတာလဲငါသဘောပေါက်ပြီ ငါဒေါသထွက်လို့ပဲ အသက် ၁၀ နှစ်၊ ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာဒေါသကြီးတဲ့ပြproblemsနာတွေရှိခဲ့တယ်။ အများအားဖြင့်အမေနဲ့အဖေကခွဲထားကြလို့ပါ။ ငါသာမန်မိသားစုလိုချင်တယ်။ နံရံတွေကိုထိုးပြီးထိုးနှက်တယ်။
ငါ PMO ၏အဆုံးမဲ့သံသရာစတင်သောအခါငါထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ငါလုပ်လိမ့်မယ်။ ဒီ ၂၇ ရက်လုံးလုံးလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြင့်မျက်နှာကိုပါးရိုက်လိုက်သည်။ ငါကျောင်းဝင်းပတ်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါဒီတစ်ကြိမ်လုံးပျောက်ဆုံးနေသောအရာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ဘဝဟာအံ့သြစရာပဲ။ ဒါဟာတစ်ခါတစ်ရံတွင်အဓိပ္ပာယ်မရှိစေပေမယ့်ကြောက်မက်ဘွယ်ပါပဲ။
ဒါကစိန်ခေါ်မှုခက်ခဲတဲ့ဒါပေမယ့်ကျွန်မရှေ့မှာအဘယ်အရပ်ထက်၎င်း၏ကောင်း၏။ ကိုယ့်ဤပြဿနာကိုမှခံရမယ့်သူငယ်ရွယ်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏သန်းပေါင်းများစွာအတွက်မကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ ၎င်း၏အမှန်တကယ်ထော့နဲ့။
Marnia ရော်ဘင်ဆင် says:
03 မှာ 30 / 2013 / 2: 27 နံနက်
porn သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၏ အဲဒါတကယ်ပါ ပျမ်းမျှအမေရိကန်လူပျိုလူပျိုအမျိုးသားများအတွက်သူတို့က“ အင်း၊ 'Merica ။ ဒါဟာလိင်နဲ့တူတယ်။ YEEEAAAHHH Porn ။ " ယခုမူကားယခုငါမြင်ရသည်မှာ (နှင့်အခြား fapstronauts များလည်းပါ ၀ င်သည်။ ) အရူးမခံထိုက်သော 'ယောက်ျား' နှင့် 'အမျိုးသမီးများ' တခု၏ UHH UHH CHH CUM CUM CUM CUM CUM CUM CH CUM CUM CUM ဖမ်းဆီးရမိသောဥမင်များကဲ့သို့ UHH UHH UHH CUM CUM CUM UHH UHHUHHHDHHHUUHHDDDDD ။ သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါကနှိုးဆွနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်သူကလူတစ်ယောက်နဲ့အစစ်အမှန်လိင်ကိုဘာလို့မကိုယ်စားပြုတာလဲဆိုတာကိုအခုငါကြည့်နေပြီ။ သူတို့သရုပ်ဆောင်နေပါတယ် ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်ဘူး ၎င်းသည်တစ်ချိန်ကမြင့်မြတ်သည်ဟုယူမှတ်ခံရသည့်ဘ ၀ ၏မှော်အတတ်ကိုဂုဏ်သိက္ခာကျစေသည်။ လိင်သည်အထူးဖြစ်ရန်၊ ရင်းနှီးသောလူနှစ် ဦး စပ်ကြားချစ်ခင်ချစ်ခင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သူ့မိခင်၏မြေအောက်ခန်း၊ တစ်ရှူးများနှင့်လက်ဝဲလက်များတွင်နေထိုင်သောလည်ပင်းမကျည်အချို့အတွက်မဟုတ်ပါ။ porn မကောင်းဘူး
04 မှာ 02 / 2013 / 7: 04 ညနေ
porn ကို fuck ဆိုတဲ့နှင့်ရရှိနိုင်မှု fuck ဆိုတဲ့။ ဘဝသည်ဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်ထိုင်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မဟုတ်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တကယ့်ကိုသဘာဝကျပေမယ့်အလွန်အကျွံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အဖြစ်ပြန်သွားပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတကယ်ကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုကြည့်ချင်တယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လူတို့အားစိတ်ဝိညာဉ်အမျိုးမျိုးကိုဖျက်ဆီးရန်သွေးဆောင်မှုကိုပေးသည်။
04 မှာ 16 / 2013 / 4: 35 နံနက်
ရယ်စရာ post ကို
အားဖြင့် 13 hoursago တင်သွင်း dota2nub
porn အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေအသေကောင်ဖြစ်ကြရင်တောင် soooo တော်တော်လေးကြောင့်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကအသက် ၂၀ ကျော် (၃၀) ကိုမိဘတွေမြေအောက်ခန်းထဲမှာနေချင်လို့လေ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကတခြားသူတွေနဲ့မတူတော့ဘူးလို့ဟန်ဆောင်ချင်တယ်။ လူတိုင်းရဲ့ DNA ရဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကိုဝေမျှရင်တောင်မှစစ်မှန်တဲ့လိင်ကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ nofap ဟာရလဒ်တစ်ခုအရအိပ်စက်ခြင်းပဲ ... ဟုတ်လား?
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုသင်လုပ်ချင်တာဖြစ်ပြီး nofap ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်သင်လုပ်ရမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာက…ဘာမှမရှိဘူး။
သင်တစ်ဦးတစ်သျှူးသို့သုတ်ရည်၏အလွန်သေးငယ်သောပမာဏကို splurge နေစဉ်သင်သည်သင်၏ခြေဆစ်များနှင့်ပေါ်တွင်သင်၏ SOCKS ပေါ်တွင်သင်၏အောက်ခြေကိုအတူကြည့်နိုင်အောင်ပူနှင့် sexy ခံစားရသောကြောင့်
porn အစဉ်အဆက်သင်ကိုချစ်နိုင်သူမှသာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ဖြစ်.
fapping မိမိကိုယ်မိမိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆိုလိုသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူအားလုံးတို့သည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေဒါပြောပါနှင့်သူတို့အမြဲအရာအားလုံးအကြောင်းကိုညာဘက်များမှာ!
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာ“ စစ်မှန်တဲ့အရာ” အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်၊
သင်တစ်ဦးမသေချာသော Joe လက်ဆွဲနှင့်သင်၏အခန်းဖော်နောက်ပြောင်မှုများချင်သောကြောင့်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာသင်ကိုယ်တိုင် blowjob ပေးဖို့ယောဂအလုံအလောက်မလုပ်ခဲ့လို့ပဲ
ယခု fapping စတင်ရန်မဟုတ်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်, ညာ? 🙂
04 မှာ 29 / 2013 / 4: 07 ညနေ
ငါကစတင်ခဲ့သည့်အခါအဘယျသို့ NoFap vs. ယခုငါ့အားဆိုလိုသည်။
by LordPudding40 ရက်ပတ်လုံး
ဒီတော့ဒီမှာငါ 40 ရက်ပေါင်းအောက်မှာတစ်ဦး tad ထိုင်လျက်ဖြစ်၏။ ငါမ PMO နှင့်ငါတသက်တာ၏အ FAP ရှိသည်သွားပါ၏အဆိုပါ 90st နေ့၌ 91 ရက်ပေါင်းဖြစ်ခြင်း, တစ်ဦးတော်တော်လေးတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သဘောထားကိုနှင့်အတူဤစတင်ခဲ့သည်။ ငါကပြောကိုမုန်းပေမယ့်ပထမဦးဆုံးနည်းနည်းအားဖွငျ့အကြှနျုပျတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကပို NoFap အပေါ်ဖြုန်းပိုအချိန်ငါ porn နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှလုပ်နေတာငါဘယ်အရာကိုနားလည်သဘောပေါက်။ အလုပ်အမှုကိုပြုလာပြီနှင့်အစပျိုးခြင်းကိုမြင်လျှင်မလိုခငျြတန်းတူအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့်ငါတကယ်, reddit ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ဆို့။ ဒါပေမယ့်အရာတိုင်းကိုငါကြီးမြတ်ပို့စ်များကိုတဆင့်ဖတ်ရှုဖို့တစ် relapse, ပတ်လည်လမ်းကြောင်းရှာရန်ခံစားရတယ်။
ပြီးတော့ငါသတိထားမိလာပြီ၊ ဒီအရာကိုငါအလေးအနက်ထားမယ်ဆိုရင်မိုးရွာတဲ့နေ့အတွက်အော်ဂဇင်တွေသိုလှောင်ထားတဲ့ပီဂစ်ဘဏ်သာမဟုတ်ဘဲ၊ ငါဒါကိုတကယ်ခက်ခဲစေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း ၄၀ လောက်ကတည်းကကျွန်မရဲ့ porn-viewing နဲ့ PMO 40 လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေဟာငါ့ဘ ၀ မှာနောက်ဆုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ သွားမယ့်သူတွေအတွက်၊ ရက် ၉၀ နဲ့မင်းရဲ့ဘ ၀ တစ်ခြားကွာခြားမှုကမင်းကိုငါမေးတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းသင်၏စွဲလမ်းမှုကိုအမှန်တကယ်ချိုးဖျက်ခဲ့ပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်မိမိကိုယ်ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအရှက်ရစေသောအရာအဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းသင်မတွေ့ဖူးသောမိတ်ဆွေဟောင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းသက်သေပြရန်အတွက် ၉၁ ရက်တွင်ပေါက်ကွဲသောအော်ဂဇင်မဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ပါ။
05 မှာ 01 / 2013 / 9: 01 ညနေ
15 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ ED အကြောင်းကိုပြောနေတာဆရာဝန်များကိုသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါ t ပါ
15 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ ED အကြောင်းကိုပြောနေတာဆရာဝန်များကိုသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကအဓိကပြproblemနာပါ။ ED အကြောင်းကိုဆရာဝန်များထံအမှန်တကယ်မည်သူမည်မျှရောက်သည်ဟုသင်ထင်သနည်း။ ဖိုရမ် (အင်တာနက်သို့မဟုတ်အခြားနည်းများ) တွင်ပြသနာများကိုသူတို့၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည့်နေရာတွင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးလိမ့်မည်ဟုလူအများကသင်ထင်ပါသလား။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုလူအများမည်မျှထင်ကြသနည်း။ ဒါကပြtheနာပါ။ PIED နဲ့ Porn Addiction ကလူတိုင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါ။
လူများသည်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ရှက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအလင်းပြနေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲတွင်ပုန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူအများက YBOP ကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ။
Re: အညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံငါတို့အဘို့အကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံ Squared ။
05 မှာ 23 / 2013 / 5: 00 ညနေ
PMO တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ - ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်
သင်စတင်ခါစလူများအတွက်၊ ဤအရာကိုသင်ယခုနားမလည်နိုင်ပါ။ ဒါဟာသင့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး ဒါဟာမုသားဒါမှမဟုတ်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုနဲ့တူပုံပေါ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်တာကအမှန်တရားပဲ။ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ သူတို့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုတွေ၊ မစုံလင်မှုတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမာရွတ်တွေ၊ အလှအပတွေရှိတဲ့ဒီကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာသင်တွေ့ရမဲ့အရာအားလုံးထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။
သင်သည်အဘယ်သို့ကြောင်း screen ပေါ်မှာတွေ့မြင်အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအမြိုးသမီးမြားနှငျ့ပတျသကျသငျ့စိတျထဲမှာစိတ်ကူးအဘယ်အရာနှင့်သူတို့ခံစားရပုံကိုအဘယ်သူတို့ရဲ့ထိတွေ့ကြောင်းအဘယ်သူအားမျှအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်, တူ၏။ အိုင်တီအဘယ်သူအားမျှအစစ်အမှန် IS !!!
သင့် ဦး နှောက်ပျက်နေတယ် သင်သည်မုသာခိုင်ခံ့သောသူဖြစ်၏။ မင်းဒီမှာပိတ်မိနေပြီ သငျသညျလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခြားလူများ၏အဘယ်အရာကိုမြင်ခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစား, "ဒီငါ့ကိုဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ " ငါ့မှာကလေးငယ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတင်မှာမဟုတ်ဘူး အစဉ်မပြတ်ငါတစ် ဦး တည်းဖြစ်လိမ့်မည် ကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးတယ် ကျွန်တော်နေမကောင်းပါ။ ငါမတရားဘူး ငါရွေးချယ်စရာမရှိဘူး ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆေးဝါးငါ့အထဲကတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာအခန်းထဲကနေမင်းဆီကနေထိုင်နေစဉ်။ မင်းကမင်းကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကမ္ဘာအုတ်မြစ်ကိုပြောင်းလဲပစ်မယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ သင့်ကိုလေးစားမည့်မိန်းကလေး၊ သင်၏ကုမ္ပဏီကိုပျော်မွေ့မည့်မိန်းကလေး၊ သင့်ကိုချစ်သောမိန်းကလေး။ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ရင်ဘတ်အပြားဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်ဆီဥတွေကြောင့်သင်ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်တဲ့မိန်းကလေး။ မလွဲမရှောင်သာသင့်ရဲ့လိမ်ပုံရိပ်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်သူတစ် ဦး ကမိန်းကလေး။ မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာ၊ မိန်းကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေသာဖြစ်တယ်။ အသားပြပွဲ။ ပြီးတော့အမဲသားကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်ပါ။
ထာဝရဘုရားကို, သငျသညျအမြိုးသမီးမြားကိုလေးစားဘယ်လောက်အကြောင်းကိုနှင့်သင်မည်သို့လူတွေအဖြစ်သူတို့ကိုမြင်သည်ငါနှင့်အတူသင်လိုချင်တာအားလုံးငြင်းခုန်။ သငျသညျသူမ၏ rating မပါဘဲမိန်းကလေးတစ်ဦးမှစကားပြောနောက်ဆုံးသောကာလအခါမူကား,, ငါ့ကိုပြောပြပါကျေးဇူးပြုပြီး? သူမ၏အမည်အားမှတ်မိဖို့ပိုလွယ်ကူဘယ်လဲ? သို့မဟုတ်သူမ၏ခွက်ကိုအရွယ်အစား?
porn စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလွယ်ကူပါတယ်။ orgasm ပျြောမှေ့စဖြစ်ပါတယ်။
သျှင်ကြောက်စရာပါပဲ။ လှုပ်ရှားမှုခဲယဉ်းသည်။ ငြင်းပယ်ခံရနာကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လုပ်။ သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းခံစားပါ။ တစ်ဦးတစ်သျှူးစပယ် jacking သင်၏အသက်တာ၏ကျန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ PMO တော်တော်ပျော်စရာမှန်သည်ဆိုသောကြောင့်?
05 မှာ 25 / 2013 / 5: 03 ညနေ
ကျနော်တို့တထောင်တော်တော်များများကွာမကောင်းသောအဖို့, အသစ်တစ်ခုအရုဏ်ဦးတည်ရှေ့ဆက်ဖို့, ကိုယျ့ကိုယျကိုတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်လျက်ရှိအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဖိုင်ဘာနဲ့အလုပ်လုပ်ပါပြီ။
ဒါဟာစိတ်ဓာတ်မရှိဘဲအရုဏ်, Self-သနားသို့မဟုတ် Self-ဆက်မသုံးခြင်မရှိဘဲအရုဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ FAP မရှိဘဲအရုဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
06 မှာ 18 / 2013 / 4: 59 နံနက်
တစ်ဦး Beta ကို၏ခုန်
ဇွန်လ 17, 2013 မှာ 2: 08 ညနေ
ဒီနေရာမှာအထုပ်မှဒါအများကြီး။ ငါထင်သောအရာကို, ပထမဦးဆုံးနှင့်, ဒီမှာဆောင်းပါးကနေယူသှားအရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါသည်, မှတ်ချက်များ, ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်နှင့်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော manosphere အရေးအသားတဦးတည်းဝါကျ၌ထချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်:
ဒါဟာသင့်အသက်တာ၌ရှိသမျှသောဧရိယာ, သင့်ဟော်မုန်းတွေနဲ့ရှုပ်ထွေး, သင့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း, သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးကို, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမရန်သင့်စွမ်းရည်, ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုသာအဘို့ခဏပျော်မွေ့ယဇျပူဇျောနိုင်စွမ်းကူးစက်။ ဒါက Manosphere အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဧရိယာရိုးရာခရစ်ယာန်တွေဟာကနေ PUA ရဲ့အပေါ်သဘောတူကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသဘောတူညီချက်များဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါငါအနီးကပ်အာရုံစိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပုလ်ဖမ်းယူချင်လျှင်, သင် porn ဝေးနေဖို့ရန်ရှိသည်။
စိတျထဲမှာထားရန်အခြားအဓိကအရာ, Matt ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆောင်လျက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းတန်ဖိုးများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထွက်ညွှန်ပြ၏ ontop သောအရာကို၏ ontop, porn ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စုံတွဲတစ်တွဲနှစ်ကရှေ့ဆက်ထုတ်ဝေမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအခြားအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ် အင်တာနက်။ porn ရောင်းအားက Amazon ဆန္ဒစာရင်းနှင့်အတူစီးပွားရေးအလုပ်လုပ်ကြောင်း twitter နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ porn ကြယ်ပွင့်နှင့်ယောဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိုသူတို့အဘို့တန်းစီဘယ်မှာမှပို Indie နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမယ့်နီးပါးတစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း tanked ။ ဒါကလက်ရှိစာပေ TV နဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အနိမ့်ဘတ်ဂျက်ပစ်ခတ်သို့မဟုတ် Netflix သို့မဟုတ် Hulu ကထုတ်လုပ် Indie ပစ္စည်းပစ္စယမှရွေ့လျားအတူ Amazon နဲ့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်ဝေစာအုပ်များမှရွေ့လျားအတူထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။
06 မှာ 21 / 2013 / 10: 53 ညနေ
porn sites များပေါ်တွင်ကျန်းမာရေးသတိပေးခကျြမြား
by BeastSlayer15 ရက်ပတ်လုံး
အကယ်၍ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ကျန်းမာရေးသတိပေးမှုရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကြီးကျယ်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ နည်းနည်းစီးကရက် packets တွေကိုနဲ့တူ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေနိုင်ခြင်း၊ Erectile disfunction ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်ခြင်းစသည်တို့ကိုရှင်းပြသည့်ကားချပ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင် "သင်၏ညစ်ညမ်းမှုပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်" စီးရီး NoFap နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများရှိလိမ့်မည်။ Pornfree နှင့်အခြားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။ ငါ၌ရှိသောအကြံအစည်၊
07 မှာ 14 / 2013 / 6: 19 ညနေ
အခြားဖိုရမ်တစ်ခုမှ -“ လူကောင်းအားလုံးအိပ်ပျော်နေကြပြီ”
Doom သူတို့ကိုဦးဆောင်ကြသည်ပုံစံများအတွက်မှီဝဲ။ သူကလူတွေရှိပါတယ်
သူတို့သည်လူများတို့အားနောက်တဖန်မယုံကြည်ကြပါ။ ငါဆိုလို, ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်
ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစှဲနှင့်ခမျြးမွှေခွငျး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုထုတ် jerking,
ဗီဒီယိုဂိမ်းပရိသတ်တွေ၊ ဒါကကျွန်တော့်အမြင်ပဲ။ အမာခံဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည်
စှဲလမျးသူ, ဒါကြောင့်ငါ) ကိုအရာသည်မည်မျှသွေးဆောင်ကိုငါသိ၏။
အကောင်းဆုံးကတဆင့်တွန်းအားပေးရန် (လူတိုင်းရှိကြောင်း) ကြှနျုပျတို့၏သဘာဝအလက်ဆောင်တွေကို အသုံးပြု.
သြတ္တပ္ပစိတ်, သူကဒီမျက်နှာသာအတွက်ဒီအခြေအနေကိုအသုံးပြုသည် ကမ္ဘာကြီးနဲ့တူတယ်
လူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းသောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရူး, ချိုးဖောက်မှုများ, သူခိုးစသည်တို့ကိုများအတွက်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်
စဉ်းစားပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၊ ကျွန်မအခန်းထဲမှာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်နေသည်
အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်အသက်အဘို့အစိတ်ဒဏ်ရာ။ အဲဒီအစားနှစ်ပေါင်းချွတ် wanking ၏, ငါ
ဒီအကျပ်အတည်း၌ဤမိသားစုကကူညီပေးခဲ့သို့မဟုတ်တားဆီးက .. ဒါကြောင့်နိုင်
သင်၏ဒေသခံကော်ဖီဆိုင်တွင်လက်ဖက်ရည်သောက်သုံးခြင်းနှင့်စဉ်းစားပါ -“ ဘာကြောင့်ဒီကောင်လေးကဒီကြက်ပဲ
ငါ့ကိုရန်ဒါရိုင်းစိုင်း?! ") နှင့်သူကိုလိုက်ရန်သူ / သူမ၏မိမိကိုယ်ကိုအတွက်ယုံကြည်ချက်မရှိပါ
သူ / သူမ၏အိပ်မက်များသည်မင်းသမီး၊ အင်ဂျင်နီယာ၊
နောက်ဥပမာတစ်ခု - တစ်နေ့မှာမင်းမှာသမီးတစ်ယောက်ရှိနိုင်တယ်။ နှင့်စဉ်းစား
သငျသညျ porn ကိုကြည့်ရှုသည်နှင့်သင့်ရွယ်တူ porn ကိုကြည့်ရှုသည်, သူတို့ရဲ့ရွယ်တူရှိပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရူးသွပ်နေတဲ့ porn ကိုကြည့်နေလို့ပဲ။ ရလား,
သူကဝဘ်သမိုင်းကြောင်းလား? ငါမစဉ်းစားဘူး .. ဒီတော့အောက်ဆုံးလိုင်းကဘာလဲ အကယ်၍
သင်တို့သည်ဤမျှသင့်လူမှုရေး, သင့်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့, ဒီအရာ drop မယ်လို့
ဒါဟာ Karma သံသရာသူ့ဟာသူဖွင့်သလိုပဲ - အချိန်ခဏလေးရောက်လာတယ်
ဖြစ်ပျက်။ တခြားသူတွေကိုကုသပေးရမယ်။ ငါတို့အဲဒီမှာမရှိဘူး
သူတို့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်သောအခါ။ ငါပြောနေတာကိုမင်းရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ရိတ်သိမ်း
07 မှာ 21 / 2013 / 4: 17 နံနက်
အဆိုပါ Porn ဘေးဥပဒ်
ညစ်ညမ်းမှုသည်အန္တရာယ်ကင်းသည်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏အကြီးမားဆုံးလှည့်စားမှုဖြစ်သည်။ လူတွေကဉာဏ်ရည်အလွန်ကောင်းပြီးညစ်ညမ်းခြင်းကို“ ဘာသာရေး” လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်သူတိုင်းကိုအလိုအလျောက်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူတို့ကျင့်သုံးတဲ့ psychoanalytical formula တစ်ခုလိုပဲ။
porn ဝေဖန်ဖြစ်ခြင်းဘာသာရေးဖြစ်ခြင်း =
ပင် Inquisition ၏အမြင့်မှာဒါတံခါးပိတ်စိတ်ကလူခဲ့ကြဘူး။ နှင့်ယနေ့လူမျှပြင်ပတွင်ဖိအားအောက်မှာဖြစ်ခြင်း, ဆန္ဒအလျောက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတိုကျခိုကျ! သူတို့က, America မှာသူတို့လိုချင်တဲ့သို့သော်စဉ်းစားရန်အခမဲ့ပါမယ်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ porn ခုခံကာကွယ်ဖို့ရှေးခယျြ? လုံးဝစိတ်ကြင်နာတတ်သော!
08 မှာ 22 / 2013 / 7: 20 ညနေ
fapstronaut နေဖြင့် Comment
ရက် ၆၀ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ထူမှုများ၊ ပိုမိုလွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုများ၊
08 မှာ 26 / 2013 / 8: 11 ညနေ
ယခုငါစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက် nofapping ခဲ့တာနှင့်နီးပါးလုံးဝငါ့ဘဝမှ porn ဖယ်ရှားပစ်ကြပြီ။ IMO ကအမေရိကန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့ရှုထောင့်ပေးခဲ့တယ်။ ကြော်ငြာများ၊ ရက်ပ်ဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုကိစ္စအဖြစ်အမြဲတစေတင်ပြကြသည်။ Miley Cyrus ၏ VMA's စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့ဘောင်ကိုဒုက္ခရောက်စေသောဤပြissueနာ၏အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
08 မှာ 27 / 2013 / 2: 33 နံနက်
porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖိုရမ်အပေါ်ဆွေးနွေးမှု
ဒါဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနိုင်ရန်အတွက်အလွန်အနည်းဆုံးကျနော်တို့ရပါမည်ညစ်ညမ်းစွဲရိုက်နှက်ရန်သဘောတူညီခဲ့သည် သိသိသာသာလျှော့ချ ကျနော်တို့ masturbate အကြိမ်အရေအတွက်ကို။
ထိုအခါမေးခွန်းကလာပါတယ်reboot လုပ်ပါပြီးနောက်အဘယ်သို့ပြုသနည်း"သို့မဟုတ်"သငျသညျပြီးသား porn စွဲရိုက်နှက်ကြသည့်အခါအဘယ်သို့ပြုသနည်း“ သင် XX ရက်အကြာတွင်ကုသခံရမည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဤမေးခွန်းသည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်။ သာလျှင်လွယ်ကူသောခဲ့ကြသည်။ ဒီမှာပြောနေတာက ၁၀ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ တောင်လိင်အကြောင်းပြောတာပါ။
ဒါပေမယ့်မေးခွန်းကတရား ၀ င်ရင်တောင်လူတွေကစပြီးစဉ်းစားကြမှာပါ။ကောင်းပြီ ... အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၂၀ ရက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မသွားပါကကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောဆက်လက်ဆက်လုပ်နိုင်သည်။ တကယ်လိုအပ်ပါသလား“ ဒီအတွေးအခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမမှားပါ။
ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆက်စပ်နေကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့သိသနည်းဟုသင်မေးခဲ့သည်။ ယောက်ျားတွေဆီကပို့စ်တွေကိုဖတ်ပြီးမှန်တယ်ဆိုတာသိဖို့ကောင်းတယ်။ ငါသည်ဤအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရှည်လျားအလုံအလောက်ရှိခဲ့တယ် ယခုအခါညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မတူပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိကြပါ။ သင်စည်းမျဉ်းကိုချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ပြက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စမတ်ဖုန်းများလူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှအမျိုးသားများသည်ထိုကိရိယာများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာအဖြစ်အသုံးပြုရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကန့်သတ်ထားသည်။
"ကဲ့သို့သောအရာမရှိပါငါ XX ရက်အကြာမှာပျောက်ကင်းအောင်ကုသပါလိမ့်မည်“ သင်၏ကုသခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ED ကိုဖယ်ရှားပစ်လျှင်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော်ယင်းသည်၎င်းထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကြောင်းမကြာမီသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ED ဟာရေခဲတောင်ရဲ့အစပဲ။
အပြည့်အဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသရသူသာယောက်ျားတွေကြောင့်လိင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ကြွလာသောအခါဒဿနအတွက်ရာသက်ပန်အပြောင်းအလဲချမှတ်သောသူဖြစ်ကြ၏။ ဂါနှင့် WhirlwindTobias နဲ့တူယောက်ျားတွေ။ ဥပမာအားအဆုံးစွန် တန်ဖိုးကိုတွေ့ ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်ထံမှမိမိကိုမိမိမှုပါ။
စိတ်တစ်ဦးကမျှတတဲ့ပြည်နယ်ရုံ dopamine receptors သို့မဟုတ် sensitivity ကိုအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလိင်အပေါ်တစ်ဦးကျန်းမာအမြင်ဖြင့်လိုက်ပါသွားရမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်“ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ” ကိုစဉ်းစားနေပါကညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ခြင်းသည်ရှက်စရာမဟုတ်ပါ။ငါသည်ငါ့ ED ဖယ်ရှားပစ်ရချင်ဒါကြောင့်ကျွန်မချင်သောမိန်းမအပေါင်းတို့သည်သွားနှင့် fuck ဆိုတဲ့နိုင်ပါတယ်"သို့မဟုတ်"ငါလိုခငျြအခါတိုင်းငါထို့နောက် masturbate နိုင်အောင်နေ့က XX ရချင်“ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးရည်းစားမရမချင်းငါလေ့လာခဲ့တဲ့အရာပဲ။
အမာခံ porn ရှောင်နေသည်ပေမယ့်နေဆဲ, သည် Facebook ပေါ်တွင်မိန်းကလေးများထွက်စစ်ဆေးနေဘျအပေါ် chatting လိင်, အဆက်မပြတ်လိင်အကြောင်းကိုကူးယဉျနှင့်ပုံမှန် masturbating သူတစ်ဦးက porn စှဲလမျးသူ ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့လုပ်နေတာ။ သူဟာအသစ်အဆန်း၊ တပ်မက်မှု၊
ဒါကြောင့်လူအများစုကကျရှုံးတာပေါ့။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားဘာမျှမပြုလုပ်ကြပါ။ လိင်နှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏စိတ်သဘောထားမှာမူတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာ "pornofied" နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါဟာဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံး“ fuck ဆိုတဲ့ပူပြင်းသောသားများ” အပေါ်ဗဟိုမထားခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။။ ဤကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင်သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးမျိုးဘယ်တော့မျှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
09 မှာ 23 / 2013 / 2: 02 နံနက်
ရက်သတ္တပတ်များနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးနားထောင်လိမ့်မယ်။ ငါစကားပြောသူမ၏နှလုံးစကားကိုနားထောငျနိုငျတယျ။ ငါ
ဖြည့်ထိုနေ့ရက်၌ရန်, စဉ်ဆက်မပြတ် flux, နွေရာသီမြက်နဲ့တောက်ပတဲ့မိုးကောင်းကင်
porn မတိုင်မီငါငယ်ရွယ်ခဲ့သည် အိပ်ရာကစောစောထပြီးစောင့်ရှောက်မယ်
နှောင်းပိုင်းတွင်အပြီးရှည်လျား churning ။ အကြှနျုပျ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအဘယ်သူမျှမချောမွေ့ခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းခဲ့ကြ
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Boney အစည်းအဝေးနေရာများအတွက်တွား။ လူတွေကငါ့မျက်လုံးတွေလို့ပြောတယ်
, စောစောနေ့လည်လွယ်ကူပါတယ်။ ငါရှေ့မှာမမေးမြန်းသောစကားသံခဲ့
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမကြည့်ခင်ငါကအားကြီးတယ်။ အဲဒါပြီးပြီထိငါလုပ်မယ် ဦး ခေါင်းကိုကိုင်ထားသည်
ကျွန်မအခန်းထဲမှာထည့်ပါ, အဲဒီမှာသင်မြင်, အရှက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲငါအလိုမြင့်မားတဲ့
ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲရိုးရှင်းသည့်“ မင်္ဂလာပါ” ကျွန်ုပ်လက်ကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ငါသူမကိုအချိန်မီကောက်ချင်တယ်
ငါသူမကိုသူမ၏သူငယ်ချင်းများ၊ သူမ၏မိဘများထံ ကပ်၍ ထားလိုက်သည်။ ကျွန်တော်မတုန်မလှုပ်ဘဲ
ကျွန်မဆင်းခေါက်ရစေခြင်းငှါ, အခါကျောက်ခင်းရှေ့တွင် cue သို့မဟုတ်မုန်း။
ညစ်ညမ်းခြင်းမပြုမီငါပျော်စရာရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်နိုင်တဲ့ကန်ပုညေရိုက်ကူး။ ပင်
အရှည်ဆုံးနာရီတိတ်ဆိတ်၏ဟာသနှင့်အတူခြိုးဖဲ့၏။ Shit ကံကောင်းပါစေ့ခဲ့သည်။
အရာ။ ညစ်ညမ်းခြင်းမပြုမီငါတစ်စုံတစ်ယောက်, ဒါပေမယ့်မရယနေ့ငါဖြစ်၏ထိုလူဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှေ့မှာ
ဘ ၀ ဟာအမြဲတမ်းမတည်မြဲတဲ့အပြင်ယုတ်ညံ့ပြီးတန်ဖိုးကြီးလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမသေဆုံးခင်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရင်အရေးမကြီးဘူး။
ဒီနေရာမှာဘာလဲ: porn စွဲငါ့ကိုအခြေခံအကျဆုံးမိမိကိုယ်ကိုနှင့်ငါ့ကိုထိတွေ့
ငါ့ကိုရွေးချယ်ပါစေ။ ငါအရမ်းခက်ခဲတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲအချိန်မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်
ငါ porn ပြီးနောက်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။
12 မှာ 12 / 2014 / 1: 49 နံနက်
DEAR porn နှင့် porn ၏ထုတ်လုပ်သူ,
သင် fuck ဆိုတဲ့။ ငါသည်သင်တို့ငါနှင့်ငါ့မျိုးဆက်မှပြုမိပါပြီအားလုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်သင်ကအားလြော့ဘယ်လောက်စကားဖော်ပြလို့မရပါဘူး။ သငျသညျ fuck ဆိုတဲ့အကြှနျုပျတို့ကို castrated ကျွန်တော်တို့ကို dehumanized ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Self-တန်ဖိုးရှိနှင့်အတူ fucked ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာ warped, သင်ထပ်ခါထပ်ခါလက်ထပ်ထိမ်းမြား, ကျိုးပဲ့အများအပြား, fucked မိသားစုများစိန်ခေါ်ကြပြီ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုများစွာသောဖို့လူနေမှုငရဲဖြစ်လာကြပါပြီ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ဘဝ, ငါတို့စိတ်ထဲအဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဘုရားသခငျသညျအကောင်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဘယ်အရာကိုဖျက်ဆီးနှင့်။ ထိုဖွင့် fucked လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviant shit ထုတ်လုပ် fuckers ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရဖို့အရာအားလုံးထက်ထက်ငါ့ကိုပိုပြီးရူးသွပ်စေသည်။ က kink.com သို့မဟုတ်အခြား fuck ဆိုတဲ့အသေးစား-လိဂ်က်ဘ်ဆိုက်များ fucking တူသောအဓိကသူတွေကိုဖြစ်စေအားလုံးသည်သင် fuckers နှင့် porn sites များ၏ထုတ်လုပ်သူများ, youtube ကလူတွေကညင်သာပျော့ပျောင်းရှာဖွေပြီးနောက် fuck ဆိုတဲ့ google မှာမြင်သောမည်သည့် fuck ဆိုတဲ့ deviant အနုပညာ shit အပေါ်အပ်လုဒ်တင်ပြီးမဆို fuck ဆိုတဲ့ softcore porn shit စကားများ fucking, မှောင်မိုက်-side အလုပ်လုပ်သင်တို့ရှိသမျှ fuckers ငရဲသို့သွားရရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ငါအသိအမှတ်ပြုမှုထက်ကျော်လွန်သင်တို့ရှိသမျှ fuck ဆိုတဲ့လူသတ်မှုချင်တယ်။ ငါသည်သင်တို့အားလုံး fuckers ငရဲ၌ကားပုပ်ပျက်တတ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကို fuckers သေဆုံးမျှော်လင့်နှင့်သင့် fuck ဆိုတဲ့ Dick နှင့် pussies ဖောက် fuck ဆိုတဲ့လှံနှင့်အတူထာဝစဉျညှဉျးဆဲခံရလိမ့်မည်။
ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။ fuck ဆိုတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအများကြီးနှင့်အတူ
12 မှာ 29 / 2014 / 4: 18 နံနက်
သူတို့ကမြေကြီးကိုအမွေရကြလိမ့်မည်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသည့် NoFappers များမှာ
ငါကဒီမှာ, ငါ choir ဟောပြောတာကိုသိပေမယ့်ရှင်းလင်းဖြစ်လာမယ့်နှင့်
နက်ရှိုင်းစွာအဘို့အ supernormal ပြုပြင်မှုများ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားခင်းကျင်းတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း
ဇီဝလိုအပ်ချက်များကို ingrained ။ လိင်အဘို့အ porn ။ အလွန်-လုပ်ငန်းများ၌
စားစရာဘို့ကယ်လိုရီ-သိပ်သည်း junk ။ Facebook ပေါ်တွင်အပေါ်ယံ Persona browsing
သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအဘို့ဤအရာတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုသောလူ - တစ်စျေးပေါ
၎င်းတို့၏ညွှန်ကြားနိုင်ပါလိမ့်မည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ဇီဝဗေဒဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရာကိုအစားထိုး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ် '' သမိုင်း၌တည်၏။
အာရုံစူးစိုက်မှု။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာအားလုံးကမ္ဘာ့သတင်းအချက်အလက်များ
အခမဲ့ရရှိနိုင်မဆိုဘာသာရပ်အပေါ်ပို့ချချက်, လဲ tutorial နှင့်မည်သို့-မှဖြစ်ကြ၏
မရေမတွက်နိုင်သောကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် ... ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကိုပြုသဖြင့်အားလုံးပါလျှင်သူကအလျှင်းမပေါင်းသည်တလုံးရဲ့
အာရုံစူးစိုက်မှု။ မာကု Manson (ကျနော်အလွန်အမင်းအသီးအသီးမှအကြံပြုချင်ပါတယ်အနေနဲ့စာရေးသူက
http://markmanson.net/attention (တရားမျှတသောသတိပေးချက် - ကင်မ်ကာဒါရှန်၏“ အင်တာနက်ကိုချိုးဖျက်” သည့်ပုံကိုကော်ဖီထုတ်လုပ်သူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ )
"အသိပညာဖို့အဆမဲ့ access ကိုအဆမဲ့အခွင့်အလမ်းတတ်၏။ သို့သော်သာ
သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို: သစ်ကိုငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရန်သင်ယူသောသူတို့အား။ ထဲမှာ
ပိုက်ဆံ, စည်းစိမ်ဥစ္စာမကျမည်အကြောင်းပင်အသိပညာမကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ, အ
အသတ်မရှိအမှိုက်သရိုက်တက်ဝတ်ပြုကြ၏။ ထိုသို့ပိုကောင်းမရကြလိမ့်မည်, ကရလိမ့်မယ်
အနာဂတျမှာ, သင်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရောင်းပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖွစျစခွေငျးငှါ
ငါ့ကိုအရှိဆုံး။ NoFap ဖို့အရေးပါ Starting Point သို့နှင့်အဓိကကြောကျတုံးအလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်
01 မှာ 02 / 2015 / 3: 30 နံနက်
ဒီအသွင်ပြောင်းမှုရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းပါ။ ငါလတစ်လတွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကိုရေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အမေကမှတ်ချက်ပေးရန်ပထမ ဦး ဆုံးပြောရလျှင်အနည်းငယ်အဆင်မပြေသော်လည်း၊ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများ (နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ပင်) တို့နှင့်များစွာစကားစမြည်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မေမေ Porn သည်အသံတိတ်လူသတ်သမားမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်ပစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုများကိုကြားနာရန်လက်ခံသောလူများစွာသည်ထိုလှုပ်ရှားမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာမိတ်များဖြစ်နိုင်သည်။ လူတွေဟာသူတို့အကြောင်းပြောဆိုနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့စတင်တာနဲ့လူတိုင်းအတွက်လွတ်မြောက်မှုနဲ့ပညာပေးမှုတွေလုပ်တယ်။
01 မှာ 02 / 2015 / 3: 40 နံနက်
ကျွန်မအတိအကျငါသည်ဤမီးလောင်ရာ desire- feeling ငါဘာကြောင့်လဲသိပေမယ့်ငါမပါဘူး
YOLO ။ သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာဘဝပျက်သောစပါးပွီ, သင်ပယ်ရှင်းသင်၏အသက်တာ fantasize နေစဉ်ညည်းတွားဟန်ဆောင်အတုမိန်းကလေးငယ်များမှာရှာဖွေနေအချိန် oodles ဖြုန်းရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, လက်ျာဘက်ရှေ့ဆက်သွားပါ။ ဘယ်သူမှ, ငါဘယ်သူမှဆိုလို, သငျသညျကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့သွားမှတဆင့်ရယ်မောပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအချို့သော Self-လေးစားမှုရှိနှင့်သင့်မြည်းကိုချွတ်ရချွတ် pissed ရ, သင့်လက်သီးမြှင့်နှင့်တစ်ဦးနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ Power ကနံပါတ်များကိုရှိလျက်, porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆွေးနွေးငြင်းခုံသငျသညျကိုရပ်တန့်, ငါရပ်တန့်နှင့်အခြားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ညစ်ညမ်းဖြတ်ပြန်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုယူပြီးစတင်ကျွန်တော်တစ်ဦးခြားနားချက်စေမည်ဆိုပါက, ရှိကွောငျးအင်အားအကောင်းဆုံးနှင့် scariest စက်မှုလုပ်ငန်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သော်လည်း။ *
02 မှာ 02 / 2015 / 5: 28 နံနက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါ ၀ င်သူအမျိုးသားများအတွက်တောင်းပန်ချင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အလှအပစံသည်အားနည်းချက်ရှိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပဲရွေးရတာအခက်တွေ့နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းမှုကြောင့်တာ ၀ န်ယူမှုခံစားနေရသည်။ မင်းတို့ကိုငါတို့လိုချင်တာမထင်ဘူး၊ အဲဒါကငါတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ငါတို့ရဲ့မလုံခြုံမှုတွေကိုကျော်လွှားချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်သည်မျက်နှာပြင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖြုန်းတီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုချစ်ချင်ပေမဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးရှာဖို့လှုံ့ဆော်မခံရဘူး။